Mesolimbic Dopamine ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
Mesolimbic Dopamine ၏နက်နဲသောအရာလှုံ့ဆော် Functions များ (2012)
Neuron - နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ၂၀၁၂ (၇၆၊ စာစောင် ၃၊ စစ။ ၄၇၀-၄၈၅))
နျူကလိယစိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်အခန်းကဏ္ဍမှလူသိများသည်, mesolimbic dopamine ၏အလုပ်မဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုးစိတ်ကျရောဂါနဲ့အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု features တွေကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ dopamine accumbens ။ အဲဒါကို "ဆုလာဘ်" အာရုံခံအဖြစ် dopamine အာရုံခံတံဆိပ်ကပ်ဖို့ရိုးရာဖြစ်လာခဲ့သော်လည်း, ဒီတစ်ခု overgeneralization ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် differential dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးကြောင့်ထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းလှုံ့ဆျောမှု၏ရှုထောင့်အကြားခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, dopamine accumbens မူလတန်းအစားအစာလှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ဖျန်ဖြေပေမယ့်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်အမူအကျင့်ကို Activation, အားထုတ်မှု၏ခေတ္တခဏ, ချဉ်းကပ်အပြုအမူ, စဉ်ဆက်မပြတ်တာဝန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု, Pavlovian ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆာပသင်ယူမှုအပါအဝင်ဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက် dopamine ၏ရှုပ်ထွေးသောအခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးပါ။
နျူကလိယ dopamine (DA) လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်အများအပြားအမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို်ပတ်သက်နေထားပြီး accumbens ။ သို့သျောလညျးဒီအပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြပြီးအချိန်များတွင် disentangle ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်ပြန်ဆိုအတွက်အရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစား differential dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးကြောင့်ထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ခွန်အားနိုး function ကို၏ကွဲပြားခြားနားရှုထောင့်အကြားခွဲခြားရန်စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ventral tegmental အာရုံခံအစဉ်အလာတံဆိပ်ကပ်ခဲ့ကြပေမယ့် "ဆုလာဘ်" အာရုံခံခြင်းနှင့် mesolimbic DA က "ဆုလာဘ်" စနစ်ကအဖြစ်ရည်ညွှန်း, ဒီမရေ General လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းတိကျတဲ့တွေ့ရှိချက်များကလိုက်ဖက်မပေးပါ။ ဟူသောဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" ၏သိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောအားဖြည့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သဘောတရားများကိုရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းမကြာခဏနေမကောင်းသတ်မှတ်ထားသည်။ Pharmacological နှင့် DA လျော့ကျလေ့လာမှုများ mesolimbic DA စိတ်ခွန်အားနိုး function ကိုအချို့ရှုထောင့်အဘို့အစိုးရိမ်ရကြောင်းသရုပ်ပြ, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေများအတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအရေးပါမှု၏။ mesolimbic DA များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအချို့သည်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စက်ခေါင်းများနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နျူကလိယ accumbens ၏လူသိများပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကိုက်ညီသောအရာမော်တာထိန်းချုပ်၏အင်္ဂါရပ်များရှုထောင့်အကြားရှိထပ်တူဒေသများတွင်ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့အပွငျဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုနှင့်သင်ယူမှု၏ရှုထောင့်မှ mesolimbic DA ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့စာပေ, ကျောအများအပြားဆယ်စုနှစ် (ဥပမာတတ်သည့်စာပေရှိနေသော်လည်း Salamone et al ။ , 1994), အထူထောင်သဘောထားကိုဆန္ဒရှိလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် mesolimbic DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏လျော့နည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူ, ဆုလာဘ်, အပျော်အပါး, စွဲလမ်းနှင့်ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုအတွက် dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအလေးပေးရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်အထူးသဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်, DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်တခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားအတူလှုံ့ဆျောမှု၏ကွဲပြားခြားနားရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ mesolimbic DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆှေးနှေးပါမညျ။
Mesolimbic DA နှင့် Motivation: အဆိုပါပြောင်းခြင်းသီအိုရီအခင်းအကျင်း
အခြားဘာမျှမဖြစ်လျှင်၊ လူသားများသည်ဇာတ်လမ်းပြောပြသူများဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်, ပြီးနောက်, ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဒဏ္,ာရီ, ပုံပြင်များနှင့်ပါးစပ်သမိုင်းအားဖြင့် regaled ခံရညအချိန်တွင်မီးပတ်ပတ်လည်၌ထိုင်သောလူများ၏သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ကြသည်။ ကျပန်းဖြစ်ရပ်မှန်များသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များကိုတစ် ဦး ဆိုနိုင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်း၏အဓိပ္ပါယ်ရှိသောမြင်ကွင်းသို့ယက်နိုင်လျှင်လူ့မှတ်ဉာဏ်ပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်လုံးဝမတူပါ။ ထိရောက်သောတက္ကသိုလ်သင်ခန်းစာ (သို့) သိပ္ပံနည်းကျဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို“ ကောင်းသောဇာတ်လမ်း” ဟုမကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ သိပ္ပံနည်းကျယူဆချက်များနှင့်သီအိုရီများသည်လည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ရိုးရှင်း။ ရှင်းလင်းသောသိပ္ပံနည်းကျယူဆချက်မှတင်ပြထားသည့်အတွေးများ၏အစီအစဉ်နှင့်ကိုက်ညီမှုကိုလိုချင်သည်။ ပြနာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုအနက်ဖွင့ ်၍ အခြားသူများကိုလျစ်လျူရှုခြင်းဖြင့်ဇာတ်လမ်း၏ကွက်တိဝင်မှုကိုတိုးမြှင့်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်မလိုက်နိုင်သောပဟေofိအပိုင်းအစများသည်တစ်စုံတစ်ခုကို ဆက်လက်၍ ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုအလွန်အမင်းမလုံမလောက်ဖြစ်စေသည်။
ဤသို့သောဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသည် DA ၏အယူအဆနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုငြင်းခုံနိုင်သည်။ စိတ်ကျရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာမှာ anhedonia ဖြစ်ပြီး DA သည် hedonic တုံ့ပြန်မှုကိုဖြန်ဖြေပေးသည့်“ ဆုပေးသည့်ထုတ်လွှင့်သူ” ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကျရောဂါသည် DA-regulated အတွေ့အကြုံလျော့နည်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ။ အလားတူစွာပင်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းမှုသည် ဦး နှောက်၏“ ဆုလာဘ်စနစ်” ကိုသိမ်းဆည်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးများမှရရှိသောအပျော်အပါး၏အတွေ့အကြုံပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုအကြံပြုထားပြီးအစားအစာကဲ့သို့သောသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုမှရရှိသောအပျော်အပါးကိုသိရှိစေရန်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသည်။ ဤသည်ပင် DA receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းစွဲများအတွက်အလွယ်တကူထိရောက်သောကုသမှုပူဇော်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် DA neuron များသည်အစားအစာကဲ့သို့သောစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုသီးသန့်တုန့်ပြန်သည်နှင့်ဤလှုပ်ရှားမှုသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုများအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုဖျန်ဖြေပေးသည်ဟူသောအချက်ကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားသော“ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်” ကိုလည်းကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောပုံပြင်များသည်ဤကျမ်းပိုဒ်များအတွက်ဆောက်လုပ်ထားသော“ ကောက်ရိုးအမျိုးသား” မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဖြင့်လူကြိုက်များသော်လည်းဤအတွေးအခေါ်များသည်စာပေကိုအနီးကပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးခြင်းမရှိပါ။
စိတ်ကျရောဂါအတွက် dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏စံနမူနာယူနိုင်ရန်, တဦးတည်းစိတ်ကျရောဂါထဲမှာ "anhedonia" ကိုမကြာခဏ Clinician (အားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့သို့မဟုတ် mislabeled ကြောင်းထွက်ညွှန်ပြခြင်းဖြင့်ဒီအယူအဆ deconstruct လုပ်ရန်စတင်နိုင်မည်Treadway နှင့် Zald, 2011) ။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ, ပျြောမှေ့စလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတွေ့ဆုံတစ်အတော်လေးပုံမှန် Self-rated အတွေ့အကြုံရှိသည်နှင့်အကျော်နှင့်ပျော်မွေ့၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှအထက်, ထိုစိတ်ဓာတ်ကလူမကြာခဏစိတ်ဓာတ်ကလူအပြုအမူကို Activation အတွက်ချို့ယွင်းရှိသည်ဖို့ပေါ်လာကြောင်းပြသဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ခေတ္တခဏ (Treadway နှင့် Zald, 2011) ။ အမှန်စင်စစ်အရှိဆုံးစိတ်ဓာတ်ကလူ psychomotor ဉာဏ်ရည်မမီ, anergia နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် (ပါဝင်သည်ကြောင့်စိတ်ခွန်အားနိုးချို့ယွင်းတဲ့ထော့နဲ့ကြယ်စုထံမှခံရDemyttenaere et al ။ , 2005; Salamone et al ။ , 2006), နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (ဤရောဂါလက္ခဏာတွေ DA implicatesSalamone et al ။ , 2006, Salamone et al ။ , 2007) ။ DA လှုပ်ရှားမှုနဲ့ hedonic အတွေ့အကြုံကို (ဥပမာအကြားရိုးရှင်းတဲ့စာပေးစာယူမရှိကြောင်းညွှန်ပြသည့်စာပေနှင့်အတူ coupled ယင်းတွေ့ရှိချက်, Smith et al ။ , 2011) နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ကြိုးစားအားထုတ် DA ဆက်သွယ်ထားသောလေ့လာမှုများ (Salamone et al ။ , 2007; စိတ်ကျရောဂါအတွက် dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းခွင့်ပြုခဲ့ကြပေသည်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ဟန်ကောက်ချက်ချရန်တဦးတည်းဦးဆောင်လမ်းပြ, အောက်ကဆွေးနွေးမှု) ကိုကြည့်ပါ။
အလားတူပင်ကမူးယစ်ဆေးမှီခိုနှင့်စွဲအပေါ်သုတေသနတစ်ခုသိသိသာသာခန္ဓာကိုယ်ဆုလာဘ်၏ DA အယူအဆများ၏ရိုးရာသဘောတရားနှင့်အတူလိုက်နာတော်မမူကြောင်းထင်ရှားပါသည်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင် DA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းသို့မဟုတ် DA ပေါင်းစပ်၏တားစီးတသမတ်တည်းကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံ Euphoria ပီတိတုံးသို့မဟုတ် "မြင့်သော" မဟုတျကွောငျးတငျပွခဲ့ကွGawin, 1986; Brauer နှင့် De ကျေး, 1997; Haney et al ။ , 2001; Nann-Vernotica et al ။ , 2001; Wachtel et al ။ , 2002; Leyton et al ။ , 2005; Venugopalan et al ။ , 2011) ။ မကြာမီကသုတေသန Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမူးယစ်ဆေးဝါးများရန် propensity နှင့်ဆက်စပ်သောထားတဲ့ Pavlovian ချဉ်းကပ်အေးစက်နေစဉ်အတွင်းကြွက်များအားဖြင့်ပြသအပြုအမူပုံစံများအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Conditions တွေကို (နိမိတ်လက္ခဏာကိုခြေရာခံ) အား သာ. ကြီးတုန့်ပြန်ပြသသောကြွက်မူလတန်းစစ်ကူ (ရည်မှန်းချက်ကိုခြေရာခံဖို့ကပိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်ပါကလေ့ကျင့်ရေးမှ dopaminergic လိုက်လျောညီထွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုပြသ; Flagel et al ။ , 2007) ။ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုစာစားချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွဖို့ သာ. ကြီးမြတ် Pavlovian conditional ချဉ်းကပ်နည်းကိုပြသနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုပိုမိုမက်လုံးပေးအေးစက်ပြသသောကြွက်လည်း (ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့် သာ. ကြီးမြတ် Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ခန့်မှန်းတွေကိုတုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုပြသလေ့ရှိပါတယ်နက်ဖြန် et al ။ , 2011) ။ အပိုဆောင်းသုတေသနမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကနဦးအားဖြည့်လက္ခဏာများဆန့်ကျင်အဖြစ်စွဲအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောရှည်လျားကျင်းပအမြင်များစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ (ဆာအားဖြည့်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ၏ကနဦးစိတ်ခွန်အားနိုးဝိသေသလက္ခဏာများ၏အတော်လေးလွတ်လပ်သောနိုင်ပါတယ်သောကျယ်ပြန့်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေအပျေါမှာတညျဆောကျ neostriatal အလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းရေးယန္တရားများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စွဲကြည့်ရှုရန်ပိုပြီးဘုံဖြစ်လာပြီKalivas, 2008; Belin et al ။ , 2009) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အာရုံကြောအခြေခံများနှင့်ယင်း၏အလားအလာကုသမှုတွေအကြောင်းဒါတွေကထွန်းသစ်စအမြင်များ, ကောင်းစွာ၏ DA အယူအဆကကမ်းလှမ်းမူရင်းဇာတ်လမ်းထက်ကျော်လွန်ပြောင်းရွှေ့ကြပါပြီ "ဆုလာဘ်။ "
သုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာနှင့်ဆက်လက်သီအိုရီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပြီးနောက်, DA သုတေသန၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးသိသိသာသာအယူအဆရေးရာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရှိခဲ့သည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား (mesolimbic DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နဂိုအတိုင်းအစားအစာဖို့စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့် hedonic တုံ့ပြန်မှု၏အခြေခံရှုထောင့်အရွက်ကွောငျးဖျောပွသBerridge, 2007; Berridge နှင့် Kringelbach, 2008; Salamone et al ။ , 2007) ။ တစ်ချိန်က "ဆုလာဘ်" သို့မဟုတ် DA ၏ "hedonia" function များ၏အမှတ်အသားများအဖြစ်အသုံးဝင်သောဖြစ်ထင်ခဲ့ကြရာထိုကဲ့သို့သောတိုးတက်သောအချိုးချိုးအချက်များနှင့် Self-stimulation တံခါးခုံအဖြစ်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ, ယခုအားထုတ်မှု၏ခေတ္တခဏနှငျ့ပတျသကျသောဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်, ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အမြင် -related သို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းစရိတ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (Salamone, 2006; ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2010) ။ အများအပြားကမကြာသေးမီ electrophysiology စာတမ်းများ (ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှဖြစ်စေယူဆသို့မဟုတ်ဖော်ထုတ် ventral tegmental DA အာရုံခံ၏တုန့်ပြန်သရုပ်ပြပါပြီAnstrom နှင့် Woodward, 2005; Brischoux et al ။ , 2009; Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009; Bromberg- မာတင် et al ။ , 2010; Schultz, 2010; Lammel et al ။ , 2011) ။ အတော်များများကစုံစမ်းစစ်ဆေးယခု (အားဖြည့်သင်ယူမှုသို့မဟုတ်အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအတွက် mesolimbic နှင့် nigrostriatal DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအလေးပေးပညာရှိ 2004; Yin et al ။ , 2008; Belin et al ။ , 2009), အစား hedonia နှုန်း se ထက်။ ဤရွေ့ကားခေတ်ရေစီးကြောင်းအားလုံးလှုံ့ဆျောမှုအတွက် dopaminergic ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ဇာတ်လမ်းတစ်ခုသိသိသာသာပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးရန်အတွက်လှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။
စိတ်ခွန်အားနိုး Processes: သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Conceptual နောက်ခံသမိုင်း
အဆိုပါအသုံးအနှုန်းလှုံ့ဆျောမှုကျယ်ပြန့်စိတ်ပညာ, Psychiatry နှင့် neuroscience များတွင်အသုံးပြုကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးကိုရည်ညွှန်းသည်။ များစွာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားများနှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, လှုံ့ဆျောမှု၏ဆှေးနှေးခအတွေးအခေါ်၎င်း၏မူလရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ကြောင်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်များဖော်ပြခုနှစ်တွင်ဂျာမန်ဒဿနပညာရှင် Schopenhauer, 1999 သက်ရှိတစ်ဦးအနေအထားတွင်ရှိရမည်သောလမ်းမှစပ်လျဉ်းလှုံ့ဆျောမှုများ၏ concept ကိုဆှေးနှေးခဲ့ "ကိုရွေးချယ်ပါသိမ်းယူနှင့်ပင်ကျေနပ်အားရမှု၏နည်းလမ်းထွက်ရှာကြာလော့။ " Motivation လည်းစိတ်ပညာ၏ကနဦးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းအကျိုးစီးပွားအရေးပါသောဧရိယာဖြစ်ခဲ့သည်။ Wundt နဲ့ James အပါအဝင်အစောပိုင်းသိပ္ပံနည်းကျစိတ်ပညာရှင်, သူတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များအတွက်ဘာသာရပ်အဖြစ်လှုံ့ဆျောမှုလည်းပါဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Hull နဲ့ Spence အဖြစ် Neobehaviorists မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောမက်လုံးပေးခြင်းနှင့် drive ကိုအဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုးသဘောတရားများကိုအလုပ်။ လူငယ်တို့, 1961 အဖြစ်လှုံ့ဆျောမှုသတ်မှတ်ပါတယ် "လုပ်ရပ်တွေကိုနှိုးဆွသောတိုးတက်မှုအတွက်လှုပ်ရှားမှုတည်တံ့ခိုင်မြဲနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ပုံစံကိုထိန်းညှိ၏ဖြစ်စဉ်ကို။ " တစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အရလှုံ့ဆော်မှု "သက်ရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ, နီးကပ်နှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုထိန်းညှိပေးသောမှတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အစုဖြစ်ပါသည် "(Salamone, 1992) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်လှုံ့ဆျောမှု၏ခေတ်သစ်စိတ်ပညာ Construction (နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းညှိဖို့သက်ရှိ enable သောအပြုအမူ-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရည်ညွှန်းသည်Salamone, 2010).
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လှုံ့ဆျောမှု၏ Construction ၏အဓိက utility ကို (ကအပြုအမူ၏ observable features တွေများအတွက်အဆင်ပြေအကျဉ်းချုပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းSalamone, 2010) ။ အပြုအမူဆီသို့သို့မဟုတ်ကွာအထူးသလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သူတို့အားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပါဝင်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်ညွှန်ကြားထားသည်။ သက်ရှိအချို့နှိုးဆွသောအခြေအနေများမှဝင်ရောက်ခွင့် (ဆိုလိုသည်မှာ, အစားအစာ, ရေ, လိင်) ကိုရှာခြင်းနှင့်တက်ကြွစွာနဲ့ passive နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်း, (ဆိုလိုသည်မှာနာကျင်မှု, အီ) အခွားသူမြားရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထို့အပွငျလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူပုံမှန်အားဖြင့်အဆင့် (စားပွဲတင် 1) တွင်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ပန်းတိုင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ထင်ဟပ်ထားတဲ့လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ terminal ကိုစင်မြင့်, လေ့ပုသူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါစကားလုံး "သူတွေရဲ့စားသောက်" (Craig, 1918) ", စားသုံးမှု" ကိုရည်ညွှန်းပေမယ့်အစား "ဖြည့်စွက်ဖို့" သို့မဟုတ်ဆိုလိုတာက "ကု" မှမပါဘူး "အပြီးသတ်ဖို့။ " စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်အားဖြင့်သက်ရှိမှသည်အချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးမှာရရှိနိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အမြင်တွင်, ဤအလှုံ့ဆော်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပိုမိုနီးကပ်စွာသူတို့ကိုဆောင်တတ်၏, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုပိုမိုစေသည်အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏ဤအဆင့်တွင်မကြာခဏ "", ဆာ "", ကြိုတင်ပြင်ဆင် "", အစာစားချင်စိတ် "အဖြစ်ရည်ညွှန်းချဉ်းကပ်မှု," သို့မဟုတ် "ရှာကြံနေပါတယ်။ ရှာကြံ" နှိုင်းယှဉ် "ယူ" ထို့ကြောင့်သုတေသီများတစ်ခါတစ်ရံအကြားခွဲခြား "" သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများကဲ့သို့သော အစားအစာ (ဥပမာ, Foltin, 2001), သို့မဟုတ်တစ်မူးယစ်ဆေးစစ်ကူဒငျ, အကယ်စင်စစ်ဟူသောဝေါဟာရကို "မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ" psychopharmacology ၏ဘာသာစကားကိုတစ်ဘုံထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်လာသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, (ဥပမာသူတွေရဲ့စားသောက်နှိုင်းယှဉ်ဆာသို့မဟုတ်ယူပြီးနှိုင်းယှဉ်ရှာကြံ) ဘာသာဂုဏ်ထူး၏ဤအစုထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်ကသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးပါသည်။
လှုံ့ဆျောမှု၏ "directional" ရှုထောင့် (ဆိုလိုသည်မှာ, ထိုအပြုအမူဆီသို့ညွှန်ကြားသို့မဟုတ်ကွာလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်သည်) အပြင်, လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူကိုလည်း "Active" ရှုထောင့် (ရှိသည်ဟုဆိုသည်Cofer နှင့် Appley, 1964; Salamone, 1988, Salamone, 2010; ပါကင်ဆန် et al ။ , 2002; စားပွဲတင် 1) ။ သက်ရှိများသောအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာအကွာအဝေးအားဖြင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ကွဲကွာ, ဒါမှမဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအတားအဆီးသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်အသုံးပြုပုံဆာပအပြုအမူတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမကြာခဏအလုပ် (ဥပမာ foraging, ဝင်္ပြေး, နှိပ်လီဗာ) ကပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်များလှုံ့ဆော်မှု-ရှာကြံသောကြောင့်, သိသိသာသာအားထုတ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်သည့်အပြုအမူ, ဆိုလိုသည်မှာ, အမြန်နှုန်းဇွဲနှင့်အလုပ် output ကိုမြင့်မားဆီသို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရင်းအမြစ်များကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ရှိရပါမည်။ ဒီအားထုတ်မှုများ၏ခေတ္တခဏအချိန်များတွင် (ဥပမာ၎င်း၏လုယူရာဥစ္စာအပေါ်သို့တိုကျခိုကျနေတဲ့အသားစား), များစွာသောအခြေအနေများကြောင့်အချိန်ကာလကြာရှည်စွာကျော်ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ရမည်ဖြစ်သည်အတော်လေးအကျဉ်းရှိနိုင်ပါသည်ပေမယ့်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ရှင်သန်မှုတစ်ခုသက်ရှိ time- သို့မဟုတ်အလုပ်-related တုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်အောင်မြင်သောသောအတိုင်းအတာအပျေါမှီခိုနိုင်သောကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related စွမ်းရည်အလွန်သပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ဤအကြောင်းများကြောင့်အမူအကျင့်ကို Activation အများအပြားဆယ်စုနှစ်လှုံ့ဆျောမှု၏အခြေခံရှုထောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်ရှည်လျားထိုကဲ့သို့သောဝင်္အတွက်ပြေးမြန်နှုန်းအဖြစ်ဆာပအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ်စိတ်ခွန်အားနိုးအခြေအနေများများ၏သရုပ်ြပသက်ရောက်မှုအလေးပေးဖို့ Drive နှင့်မက်လုံးပေး၏သဘောတရားများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Cofer နှင့် Appley, 1964 conditional လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated နိုင်သည့်မျှော်လင့်-ညျခှနျအားယန္တရားရှိကွောငျးကိုအကြံပြုနှင့်ဆာပအပြုအမူ invigorate မှလည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ရာ။ ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအားဖြည့်လုံးလေးများအဖြစ်မူလတန်းစိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှု၏ Scheduled noncontingent တင်ဆက်မှုအရက်သောက်, ရွေ့လျားနှင့်ဘီး-running (အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများ, သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်Robbins နှင့် Koob, 1980; Salamone, 1988) ။ အတော်ကြာသုတေသီများနောက်ဆုံးမှာ operating အပြုအမူ (ဥပမာစီးပွားရေးမော်ဒယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အုတ်မြစ်မှကူညီပေးခဲ့သည်ထားတဲ့ဆာပတာဝန်များကိုများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အလုပ်လိုအပ်ချက်များကို၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြ, Hursh et al ။ , 1988) ။ Ethologists လည်းအလားတူသဘောတရားအလုပ်ပါပြီ။ Foraging တိရိစ္ဆာန်များအစားအစာ, ရေ, သို့မဟုတ် nesting များနမူနာပစ္စည်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်စွမ်းအင်ကိုအသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အကောင်းဆုံး forage သီအိုရီသည်ဤလှုံ့ဆော်မှုရရှိရန်အသုံးအားထုတ်မှုသို့မဟုတ်အချိန်ပမာဏကိုရှေးခယျြမှုအပြုအမူ၏အရေးပါသောပစ်မှတ်သည်မည်မျှဖော်ပြသည်။
မော်တာထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှု၏ activational ရှုထောင့်အကြားသိသိသာသာထပ်တူထပ်မျှ၏အတော်လေးဒီဂရီရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အစားအစာချို့တဲ့ခြင်းသည် ၀ င်္ကပါထဲ၌ပြေးနှုန်းမြန်ဆန်စေသည် ၎င်းသည်စိတ်ခွန်အားနိုးခြင်း၊ မော်တာသို့မဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသောအခြေအနေများကိုထင်ဟပ်စေသလား။ Locomotor လှုပ်ရှားမှုသည်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အာရုံကြောစနစ်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကြွက်များတွင် locomotor လှုပ်ရှားမှုလည်းထိုကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်း, အစားအစာဆင်းရဲချို့တဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အစားအစာလုံးလေးများ၏အခါအားလျော်စွာတင်ဆက်မှုအဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုးအခြေအနေများ၏သက်ရောက်မှုကိုအလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အကယ်၍ သက်ရှိတစ်ခုသည်ပကတိစွမ်းဆောင်ရည်အတွင်းအလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုနှင့်တင်ပြပါက၎င်းစိန်ခေါ်မှုကိုမကြာခဏ ပို၍ အားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ operant အချိန်ဇယားအပေါ်အချိုးအစားလိုအပ်ချက်များကိုတိုးမြှင့်, တစ် ဦး ပွိုင့်အထိ, တုံ့ပြန်မှုနှုန်းအပေါ်သိသိသာသာအထက်သို့ဖိအားဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ၀ င်္ကပါတွင်းရှိအတားအဆီးကဲ့သို့သောအတားအဆီးတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ခြင်းသည်ကြွက်များအားသူတို့၏အားစိုက်ထုတ်မှုများကိုတိုးစေပြီးအတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အစားအစာကဲ့သို့သောအဓိကလှုံ့ဆော်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သော Pavlovian ၏အေးစက်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုတင်ပြခြင်းကကိရိယာတန်ဆာပလာလှုပ်ရှားမှုအားလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်သို့မဟုတ် Pavlovian ဟုလူသိများသောအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။Colwill နှင့် Rescorla, 1988) ။ ထို့ကြောင့်မော်တာ output ကိုထိန်းညှိသောအာရုံကြောစနစ်များ (ထိုတိုက်ရိုက်အပြုအမူဆီသို့သို့မဟုတ်ကွာအထူးသလှုံ့ဆော်မှုထံမှထိုအာရုံကြောစနစ်များ၏ behest မှာလုပ်ကိုင်ရန်ပေါ်လာSalamone, 2010) ။ ၏သင်တန်း, အသုံးအနှုန်းများ "မော်တာထိန်းချုပ်မှု" နှင့် "လှုံ့ဆျောမှု" အတိအကျနဲ့အတူတူပါပဲဆိုလိုပါဘူး, နှင့်တဦးတည်းကိုအလွယ်တကူ nonoverlap ၏မှတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, က (ကအခြေခံထပ်တူအဖြစ်ကောင်းစွာရှိကွောငျးထငျရှားSalamone, 1992, Salamone, 2010) ။ ဒီလေ့လာရေး၏အလင်းမှာ, နှစ်ဦးစလုံးနောက်ဆုံးတွင်လက်တင်စကားလုံးကနေဆင်းသက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားများလှုံ့ဆျောမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်စဉ်းစားရန်သိကောင်းစရာများဖြစ်ပါသည် တစ်ပန်း(ဆိုလိုသည်မှာရွှေ့ဖို့, moti ၏အတိတ် participle ဖြစ်ပါသည် တစ်ပန်း) ။ သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူနှိုင်းယှဉ်ဆာ (သို့မဟုတ်ယူပြီးနှိုင်းယှဉ်ရှာကြံ) အကြားခြားနားနှင့်ဝသကဲ့သို့, လှုံ့ဆျောမှု၏ directional ရှုထောင့်နှိုင်းယှဉ် Active တို့အကြားကွဲပြားခြားနားမှုကျယ်ပြန့် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေး (စားပွဲတင် 1) ၏သက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များများ၏မတူကွဲပြားသဘောသဘာဝဟာအပြုအမူ dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေး၏သက်ရောက်မှုအဖြစ်ကြောင်း mesolimbic DA အာရုံခံ၏ dynamic လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆွေးနွေးခြင်းစာပေ၏အရေးပါသော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နျူကလိယ Accumbens DA ဂီယာနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်များ၏သက်ရောက်မှုများ Dissociative သဘာဝတရား
accumbens DA များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ်စာပေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားနေအတွက်ကျနော်တို့အယူအဆရေးရာအခြေခံမူများအများအပြားအထက်တွင်မီးမောင်းထိုးပြထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ တဖကျတှငျကျနော်တို့စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအစိတ်အပိုင်းများသို့ dissociable ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်သင့်ကြောင်း, accumbens DA ဂီယာ၏ထိန်းသိမ်းရေးတစ်ခါတစ်ရံစိန်ရှုး၏လျှောက်လွှာများကဲ့သို့ဤအစိတျအပိုငျးမှီဝဲနိုင်ဖြစ်ကြောင်း, အကြီးအကျယ်ထိခိုက်အခြားသူများကိုထွက်ခွာစဉ်သိသိသာသာအချို့ပြောင်းလဲ (Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2002; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003; Smith et al ။ , 2011) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်စဉ်များသည်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ယန္တရားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အာရုံကြောစနစ်များအကြားတိကျသောအချက်မှမြေပုံဆွဲခြင်းမရှိကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ရမည်။ ထို့ကြောင့် dopaminergic ကိုင်တွယ်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့ကိုလှုံ့ဆော်မှု၊ မော်တာလုပ်ဆောင်မှု (သို့) သင်ယူမှု၏တိကျသောရှုထောင့်များအပေါ်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုထိရောက်စွာနားလည်နိုင်ပြီးအခြားသက်ရောက်မှုများသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုများအကြားထပ်တူကျသောနေရာများတွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် DA accumbens သည်အလွန်တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အလွန်ရှုပ်ထွေးသောစက်ယန္တရားတစ်ခုကိုဤကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုစဉ်းစားရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် accumbens DA သည်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့်အပြုအမူသို့မဟုတ်အာရုံကြောသိပ္ပံနည်းသည်ဤလုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်သော်လည်းအခြားသူများအတွက်မူမသင့်တော်ပါ။ ယင်းကိုထောက်ရှု။ ၎င်းသည်ဆိုရိုးစကားကိုစုစည်းရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
ဦးနှောက်ထိန်းသိမ်းရေးအလွန်တိကျသောထုံးစံ၌တစ်ဦးအမူအကျင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ subcomponents ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာနိယာမသိမြင်မှုမှ neuroscience အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ခဲ့နှင့် (-independent ဖြစ်စဉ်များနှိုင်းယှဉ်ဆိုလိုသည်မှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှတ်ဉာဏ်နှိုင်းယှဉ် declarative ဟူ. , ရည်ညွှန်းမှတ်ဉာဏ်သာရှိပြီးပြည်ပမှအလုပ်လုပ်ကိုင်, hippocampal-မှီခို) dissociable မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရေးကြီးသောဘာသာဂုဏ်ထူးမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဆနျ့ကငျြ, accumbens DA များ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆွေးနွေးခြင်းစာပေများစွာအတွက်စိတ်သဘောထားမယ့်အစား, ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အခြားထိန်းသိမ်းရေးများ၏လုပ်ရပ်များအနှစ်ချုပ်ဖို့ "ဆုလာဘ်" အဖြစ်ဆိုလိုသည်မှာအလွန်ယေဘုယျပြီးဝိုးတဝါးအသုံးအနှုန်းများမဟုတ်ဘဲတုံးအယူအဆရေးရာတူရိယာသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာထိုဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" (တခြားနေရာအသေးစိတ်ဝေဖန်ထားသည်ကင်နွန်နှင့် Bseikri, 2004; Salamone, 2006; Yin et al ။ , 2008; Salamone et al ။ , 2012) ။ ဟူသောဝေါဟာရကိုဆုလာဘ်တစ်ခု neurobehavioral ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအခါ, "ဆုလာဘ်" ၏အဘယ်သူမျှမတသမတ်တည်းသိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းမရှိ "စစ်ကူ" တစ်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, အခြားသူတွေက "anhedonia အယူအဆတစ်ခုသမိုင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အတွက်" မူလတန်းလှုံ့ဆျောမှု "သို့မဟုတ်" စာစားချင်စိတ်ကို, "သို့မဟုတ်" အပျြောအပါး "သို့မဟုတ်" hedonia "တစ်ကျဲပါး်၏တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym အဖြစ် (ဆိုလိုမှအသုံးပြုရန်အနေဖြင့်အချို့သော" အားဖြည့် "အတွက်တစ်ဦးတစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym အဖြစ် employ "ကိုကြည့်ပါ ပညာရှိ 2008) ။ များစွာသောအမှုများမှာစကားလုံး "ဆုလာဘ်" အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိနှစ်ဦးစလုံးရှုထောင့်အပါအဝင်အစာစားချင်စိတ်သင်ယူမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်, ကိုရည်ညွှန်းကြောင်းယေဘုယျအသုံးအနှုန်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ပုံရသည်; ဒီအသုံးပြုမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အနတ္တဖြစ်သကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်သည်။ တဦးတည်းဟူသောဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" ၏သုံးရင်ဒီဒေသမှာကြီးမားတဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရင်းအမြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်နိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းဆောင်းပါးအပျြောအပါးကိုဆိုလိုတာမှဆုလာဘ်သုံးနိုင်ပါသည်နေစဉ်, အခြားသင်ယူခြင်းမဟုတ်အပျော်အပါးနှင့်တတိယတစ်ဦးအလွန်ယေဘုယျလမ်းအတွက်လှုံ့ဆျောမှု appetitive ရည်ညွှန်းပြီးစေခြင်းငှါ reinforcement ရည်ညွှန်းဖို့အသုံးအနှုန်း employ လိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား mesolimbic DA များ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဆှေးနှေးခ obfuscates သောစကားလုံး, သုံးခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး "ဆုလာဘ်သည့်စနစ်" အဖြစ် mesolimbic DA labeling ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှေးမှိန်စေရန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဟူသောဝေါဟာရကို "ဆုလာဘ်" နဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာကဒီစာရေးသူကအားဖြင့် unintended ရင်တောင်, များစွာသောစာဖတ်သူများနှစ်သက်သို့မဟုတ် hedonia ၏အယူအဆ evokes သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကစစ်ကူအဘို့စိတ်အားထက်သန်၏အင်္ဂါရပ်များအတွက် accumbens DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပျေါမှာအာရုံစူးစိုက်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် DA အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုအချို့ရှုထောင့်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ် accumbens ကြောင်းနည်းနည်းသံသယရှိ၏ ဒါပေမယ့်အရာရှုထောင့်, ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်မြင်ရကြလတံ့အမျှ accumbens DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်များ၏သက်ရောက်မှုနဂိုအတိုင်းအခြားသူများကိုထွက်ခွာနေချိန်တွင်လှုံ့ဆော်မှုအချို့ရှုထောင့် impairing, သဘောသဘာဝအတွက်အလွန်အမင်းရွေးချယ်သို့မဟုတ် dissociative ဖြစ်ကြသည်။ ဤအပိုင်းကို၏ကျန်ရှိသော dopaminergic မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ် neurotoxic အေးဂျင့်အမူအကျင့် function ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အသုံးပြုသည့်အတွက်စမ်းသပ်ချက်၏ရလဒ်များကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့် forebrain DA လျော့ကျစားအယှက်နိုင်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုပေမဲ့, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုနီးကပ်စွာလျော့ကျသို့မဟုတ် DA ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သို့မဟုတ် ventrolateral neostriatum ၏ sensorimotor သို့မဟုတ်မော်တာ-related ဒေသများရှိပေမယ့်မရနျူကလိယ accumbens (ဆက်စပ်နေသည်Dunnett နှင့် Iversen, 1982; Salamone et al ။ , 1993) ။ မကြာသေးမီက optogenetics လေ့လာမှု DA အာရုံခံ၏တားစီးမှုသော ventral tegmental ဂါဘမြို့သားအာရုံခံလှုံ့ဆော်, (အစားအစာစားသုံးမှုနှိမ်နင်းရန်ပြုမူကြောင်းပြသဗန် Zessen et al ။ , 2012) ။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုအထူးကြောင့် dopaminergic လုပ်ရပ်များမှလျှင်, သို့မဟုတ်ပါကလည်းဒီကိုင်တွယ်နှင့်အတူထုတ်လုပ်ဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုအပေါ်သို့မှီခိုလျှင်သို့ရာတွင်ထိုသို့ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးTan et al ။ , 2012) ။ တကယ်တော့, accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (သိသိသာသာအစားအစာစားသုံးမှုအယှက်မှမထပ်တလဲလဲပြသပြီUngerstedt, 1971; Koob et al ။ , 1978; Salamone et al ။ , 1993; Baldo et al ။ , 2002; Baldo နှင့်ကယ်လီ, 2007) ။ : D ၏ထိုး၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်မှာအခြေခံ1 သို့မဟုတ်: D2 , Core ဒါမှမဟုတ် shell ကိုအာရုံချို့ယွင်းမော်တာလှုပ်ရှားမှု accumbens, ဒါပေမယ့်အစားအစာစားသုံးမှုဖိနှိပ်ခဲ့ပါဘူးသို့မိသားစုရန် Baldo et al ။ , 2002 accumbens DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း "စားရန်အဓိကလှုံ့ဆျောမှုများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းမရှိပေ။ " အဲဒီဖော်ပြထား Accumbens DA လျော့ကျအစားအစာစားသုံးမှုသို့မဟုတ်နို့တိုက်ကျွေးမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ပျက်ကွက်ခြင်း, ventrolateral neostriatum အလားတူလျော့ကျသည်ဤအစီအမံများကိုထိခိုက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေမယ့်, အစားအစာကိုင်တွယ်အယှက်မပြုခဲ့ (Salamone et al ။ , 1993) ။ ထို့အပြင်, အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူအပေါ် DA ၏သက်ရောက်မှုရန်သို့မဟုတ် accumbens DA လျော့ကျနီးကပ်စွာ (စာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူကြဘူးSalamone et al ။ , 2002; နစ်မြုပ် et al ။ , 2008), သို့မဟုတ် prefeeding ပေးစစ်ကူတန်ဖိုး (Salamone et al ။ , 1991; Aberman နှင့် Salamone, 1999; Pardo et al ။ , 2012). Lex နှင့် Hauber, 2010 accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက်တစ်ဦးဆာတာဝန်စဉ်အတွင်းအစားအစာအားဖြည့်များ၏တန်ဖိုးမှအထိခိုက်မခံခဲ့ကြကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ Wassum et al ။ , 2011 အဆိုပါ DA ရန် flupenthixol အစားအစာဆုလာဘ်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်အစားအစာဟာဆင်းရဲချို့တဲ့သဖြင့်ထုတ်လုပ်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်အတွင်းရှိ upshift အားဖြင့်သွေးဆောင်ဆုလာဘ်အာခေါင်ထဲမှာတိုး၏အာခေါင်ကိုထိခိုက်မပြုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများကိုလည်းနျူကလိယ DA တိုက်ရိုက်အစားအစာမှ hedonic reactivity ကိုဖျန်ဖြေပါဘူး accumbens ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Berridge နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှအလုပ်တခုကြီးမားခန္ဓာကိုယ် DA ရန်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမှု, အပြင်မြေတပြင်လုံး forebrain သို့မဟုတ်နျူကလိယ accumbens အတွက် DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ, ချိုမြိန်ဖြေရှင်းချက်မှ hedonic reactivity ကိုတစ်ကျယ်ပြန့်လက်ခံထားသောအတိုင်းအတာဖြစ်သောစားစရာဘို့အစာစားချင်စိတ်အရသာ reactivity ကို, တုံးမသရုပ်ပြထားပါတယ် (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998, Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2003; Berridge, 2007) ။ အဆိုပါ DA ပို့ဆောင်ရေးထိုမှတပါး, knockdown (Peciña et al ။ , 2003) အဖြစ်နျူကလိယ accumbens သို့အမ်ဖီတမင်း၏ microinjections (Smith et al ။ , 2011), အရာနှစ်ဦးစလုံး extracellular DA ခြီးမွှော, sucrose အဘို့အစာစားချင်စိတ်ကိုအရသာ reactivity ကိုမြှင့်တင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ Sederholm et al ။ , 2002 နျူကလီးယပ်အတွက် D2 receptors shell ကိုဆန္ဒရှိအရသာ reactivity ကိုထိန်းညှိ accumbens ကြောင်းအစီရင်ခံနှင့် brainstem D2 အဲဒီ receptor ဆွ sucrose စားသုံးမှု, ဒါပေမယ့်အရသာ၏ hedonic display ကိုကမကထပြုခဲ့ receptors မလူဦးရေနှိမ်နင်း။
အကယ်၍ နျူကလိယသည် အကယ်၍ DA သည်အစားအစာအတွက်အစာစားချင်စိတ်ကိုပြေလည်အောင်မဖြည့်ဆည်းပေးလျှင်၊ သို့မဟုတ်အစားအစာ - သွေးဆောင် hedonic တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်အစားအစာလှုံ့ဆော်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကားအဘယ်နည်း။ DA depletles or antagonism သည်အစားအစာကြောင့်ဖြစ်သော hedonia, အစာစားချင်စိတ် (သို့) အဓိကအစားအစာ၏အဓိကရှုထောင့်များကိုစွန့်ခွာသွားစေသည့်သဘောတူညီချက်ရှိသည်။ သို့သော်အဓိကကျသော (ဥပမာ - အစားအစာရှာဖွေသည့်) အပြုအမူအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည် (ဇယား ၁; ပုံ ၁) ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကနျူးကလီးယပ်စ် DA သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။Koob et al ။ , 1978; Robbins နှင့် Koob, 1980; Salamone, 1988, Salamone, 1992; Salamone et al ။ , 1991, Salamone et al ။ , 2005, Salamone et al ။ , 2007; Calaminus နှင့် Hauber, 2007; Lex နှင့် Hauber, 2010ဆာအပြုအမူကာလအတွင်းကြိုးစားအားထုတ်မှု၏), ခေတ္တခဏ (Salamone et al ။ , 1994, Salamone et al ။ , 2007, Salamone et al ။ , 2012; Mai et al ။ , 2012), ဆာလွှဲပြောင်းဖို့ Pavlovian (ပါကင်ဆန် et al ။ , 2002; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Lex နှင့် Hauber, 2008), ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်အပြုအမူ (Nicola, 2010), စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်နှင့်စည်းမျဉ်း (Salamone, 1987; Beeler et al ။ , 2012), နှင့်ဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏ခေါင်းပုံဖြတ် (Beeler et al ။ , 2010) ။ Accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအလိုအလျောက်နဲ့အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျွေးမွေးပြုစုအဖြစ်လှုံ့ဆော်-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှု (လျော့ချKoob et al ။ , 1978; ဝမ်းကွဲ et al ။ , 1993; Baldo et al ။ , 2002) ။ အစားအစာရှားပါးသောတိရိစ္ဆာန်များအားအစားအစာလုံးလေးများကိုအခါအားလျော်စွာတင်ပြခြင်းဖြင့်သွေးကြောအလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ ဘီးပြေးခြင်းသို့မဟုတ်ရွေ့လျားလှုပ်ရှားခြင်းကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများ accumbens DA DA ၏လျော့နည်းသွားမှုကြောင့်လျှော့ချသည် (Robbins နှင့် Koob, 1980; McCullough နှင့် Salamone, 1992) ။ ထို့အပြင် DA ရန်၏, အနိမ့်ဆေးများအဖြစ် DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ကျ accumbens, အစားအစာစားသုံးမှုသူတို့အားအခြေအနေများ (အောက်မှထိန်းသိမ်းထားကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းအစားအစာ-အားဖြည့်အချို့လုပ်ငန်းများကိုအပေါ်တုံ့ပြန်လျှော့ချSalamone et al ။ , 1991, Salamone et al ။ , 2002; Ikemoto နှင့် Panksepp, 1996; Koch et al ။ , 2000) ။ အစားအစာ-အားဖြည့်အပြုအမူအပေါ် accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုတာဝန်လိုအပ်ချက်များကိုသို့မဟုတ်အားဖြည့်အချိန်ဇယားကိုအပေါ်သို့ မူတည်. သည်အလွန်ခြားနားသည်။ accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အဓိကသက်ရောက်မှုများစားစရာဘို့အစာစားချင်စိတ်တစ်လျှော့ချရေးနှင့်ပတ်သက်သောကြသည်မှန်လျှင်, ထို့နောက်တ fixed အချိုး 1 (FR1) အချိန်ဇယားဒီကိုင်တွယ်ရန်အလွန်အမင်းထိခိုက်မခံဖြစ်သင့်ကြောင်း။ မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ် မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီအချိန်ဇယား (accumbens အတွက်ညှိ DA ဂီယာ၏သက်ရောက်မှုမှအတော်လေးအာရုံမခံစားနိုင်သောဖြစ်ပါသည်Aberman နှင့် Salamone, 1999; Salamone et al ။ , 2007; Nicola, 2010) ။ ; အစားအစာအားဖြည့်အပြုအမူအပေါ် accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုအလျှော့ပေးလိုက်လျောသည့်အရေးပါသောအချက်များတစ်ခုမှာအချိုးလိုအပ်ချက် (စစ်ကူနှုန်းလိုအပ်လီဗာပုံနှိပျ၏ဆိုလိုသည်မှာအရေအတွက်၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည် Aberman နှင့် Salamone, 1999; Mingote et al ။ , 2005) ။ ထို့အပြင် accumbens DA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားမှုများကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသောကိရိယာတန်ဆာပလာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားနည်းစေသည်။Wakabayashi et al ။ , 2004; Nicola, 2010).
အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများအကြား, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဆာပတာဝန်များကိုအကြား dissociate မှ DA ရန်သို့မဟုတ် accumbens DA လျော့ကျများ၏စွမ်းရည်, အခြို့အသေးအဖွဲအသေးစိတ်သို့မဟုတ် epiphenomenal ရလဒ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား, ကအစားအသောက်-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူနှောင့်အယှက်နိုင်သည့်အတွက်အခြေအနေများအောက်တွင်, အစားအစာလှုံ့ဆျောမှု၏အခြေခံရှုထောင့်လက်ထက်နဂိုအတိုင်းဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ အားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အခြေခံလက္ခဏာများအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားကြသူစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အရေအတွက်ကိုအဖြစ်အပြုသဘောစစ်ကူသရုပ်ဆောင်လှုံ့ဆော်မှုအတော်လေးနှစ်သက်ခံရဖို့လေ့, ဒါမှမဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားထား, ဒါမှမဟုတ်သူတွေရဲ့စားသောက်အပြုအမူထုတ်ယူ, ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ချက်မြင့်မားဒီဂရီ generate မှနိဂုံးချုပ်ပြီ, ဤအဆိုးကျိုးများအပြုသဘောအားကောင်း၏အခြေခံရှုထောင့်ဖြစ်ကြောင်း (Dickinson နှင့် Balleine, 1994; Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2002; Salamone et al ။ , 2012) ။ ကကမ်းလှမ်းအပြုအမူစီးပွားရေးဆန်းစစ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Hursh, 1993တုံ့ပြန်မှုသည်စားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အဓိကကျသောကြောင့်အရေးကြီးသောဒုတိယမှီခိုအားထားရသော variable တစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရလဒ်များသည် DA ဆန့်ကျင်ဖက်များနှင့် DA ပြတ်တောက်မှုပမာဏနည်းပါးခြင်းသည်အခြေခံသို့မဟုတ်အကန့်အသတ်မရှိသောအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အားဖြည့်ခြင်း၏အခြေခံကျသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိသော်လည်းတိရိစ္ဆာန်များအားတုန့်ပြန်မှုလိုအပ်ချက်၏အချို့သောအင်္ဂါရပ်များအပေါ်အထိခိုက်မခံခြင်း၊ နှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အစားအစာအားဖြည့်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်၏သဘောထားကိုလျှော့ချ။
DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏အနိမ့်စနစ်တကျဆေးများများ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများနှင့် accumbens DA ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ dissociative သဘောသဘာဝသရုပ်တစ်ခု, ဤအခြေအနေများအားထုတ်မှု -based ဆုံးဖြတ်ချက်ချအကဲဖြတ်ရန်တာဝန်များကိုအပေါ်တုံ့ပြန်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အပြုအမူများ၏ဆွေမျိုးခွဲဝေအကျိုးသက်ရောက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ (Salamone et al ။ , 2007; Floresco et al ။ , 2008; Mai et al ။ , 2012) ။ dopaminergic ကိုင်တွယ်မှု၏တုန့်ပြန်မှုခွဲဝေမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာကြွက်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းရရှိနိုင်သော်လည်းပိုမိုနည်းပါးသောအစားအစာကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုနှစ်သက်သောအစားအစာကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်အားဖြည့်သည့်လီဗာဖိအားအကြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုပေးသည်။Salamone et al ။ , 1991, Salamone et al ။ , 2007) ။ အခြေခံသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်, လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များကိုနှိပ်လီဗာအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်အများစုရနှင့် Chow ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏစားသုံးကြသည်။ : D ဖြစ်စေပိတ်ဆို့ကြောင်း DA ရန်၏ low-To-အလယ်အလတ်ဆေးများ1 သို့မဟုတ်: D2 မိသားစု၏လက်ခံမှုပုံစံငယ်များသည်ဤတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်သည့်ကြွက်များတွင်တုန့်ပြန်မှုခွဲဝေမှုကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေသည်။ အစားအစာကိုအားဖြည့်ပေးသောလီဗာကိုဖိအားကျစေသော်လည်း၊Salamone et al ။ , 1991; Koch et al ။ , 2000; နစ်မြုပ် et al ။ , 2008) ။ ဤသည်တာဝန်အများအပြားစမ်းသပ်ချက်အတွက်အတည်ပြုထားသည်။ စားသုံးမှု Chow မှနှိပ်လီဗာအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုကိုထုတ်လုပ်ကြောင်း DA ရန်၏ဆေးများ (စုစုပေါင်းအစားအစာစားသုံးမှုကိုထိခိုက်သို့မဟုတ်အခမဲ့-နို့တိုက်ကျွေးရေးရွေးချယ်မှုစာမေးပွဲများတွင်ဤနှစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အစားအစာများအကြား preference ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြဘူးSalamone et al ။ , 1991; Koch et al ။ , 2000) ။ fenfluramine နှင့် cannabinoid CB1 ရန် (အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းမှမတူဘဲ, အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်းSalamone et al ။ , 2007; နစ်မြုပ် et al ။ , 2008), ကိုနှိပ်လီဗာနှိမ်နင်းကြောင်းဆေးများမှာ Chow စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏သက်ရောက်မှုမှမတူဘဲ, စစ်ကူတန်ဖိုးအမျိုးအစားဖြစ်သော Pre-နို့တိုက်ကျွေးရေး, နှစ်ဦးစလုံးလီဗာနှိပ်ပြီး Chow စားသုံးမှုလျှော့ချ (Salamone et al ။ , 1991) ။ ဤရလဒ်သည် DA ဂီယာနဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရိုးရှင်းစွာမူလတန်းအစားအစာလှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပေမယ့်အစားကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုတဆင့်ရရှိသောဖြစ်ကြောင်းအစားအစာ၏အခြားရွေးချယ်စရာသတင်းရင်းမြစ်များအကြားတုံ့ပြန်မှုခွဲဝေပွောငျးလဲပါဘူးဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ accumbens DA အပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနဲ့: D ၏ဒေသခံတာဟာထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်1 သို့မဟုတ်: D2 accumbens core ကိုသို့မဟုတ် shell ကို (သို့မိသားစုရန်Salamone et al ။ , 1991; Koch et al ။ , 2000; Nowend et al ။ , 2001; Farrar et al ။ , 2010; Mai et al ။ , 2012).
တစ်ဦးကကို T-ဝင်္လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ရွေးချယ်မှုလေ့လာဖို့တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတာဝန်အတွက်, ဝင်္ခဲနှစ်ခုရွေးချယ်မှုလက်နက်ကွဲပြားခြားနားသောအားဖြည့် DENSITY (ဥပမာ4အစားအစာလုံးလေးများနှိုင်းယှဉ် 2, ဒါမှမဟုတ်4နှိုင်းယှဉ် 0) ရန်နှင့်အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်တစ်ဦးအတားအဆီးအစားအစာအားဖြည့်များ၏ပိုမိုမြင့်မားသိပ်သည်းဆနှင့်အတူလက်ရုံးထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါသည် တစ်ခုအားထုတ်မှု-related စိန်ခေါ်မှုစည်းကြပ်ရန် (Salamone et al ။ , 1994) ။ အမြင့်ဆုံးသောသိပ်သည်းဆလက်မောင်းရာဌာန၌အတားအဆီးရှိပါတယ်, နှင့်အတားအဆီးမရှိဘဲလက်မောင်း (နည်းပါးလာစစ်ကူများပါဝင်သည် DA ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ် / မြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်လက်မောင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကျဆင်းခြင်းရွေးချယ်မှု accumbens, နှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် / အနိမ့်ချသောဆုလကျရုံး၏ရွေးချယ်ရေးတိုးမြှင့်သည့်အခါSalamone et al ။ , 1994; Denk et al ။ , 2005; Pardo et al ။ , 2012; Mai et al ။ , 2012) ။ အဆိုပါဝင်္မရှိအတားအဆီးရှိစဉ်အခါ, ကြွက်မြင့်အားဖြည့်သိပ်သည်းဆလက်မောင်းပိုမိုနှစ်သက်နှင့် DA အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်သလို accumbens မ DA လျော့ကျ (သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပြောင်းလဲSalamone et al ။ , 1994) ။ ယင်းအတားအဆီးနှင့်အတူလက်မောင်း4လုံးလေးများပါရှိသောပေမယ့်အခြားလက်မောင်းအဘယ်သူမျှမလုံးလေးများပါရှိသောအခါ, accumbens DA ကွယ်ပျောက်သွားစေနှင့်အတူကြွက်နေဆဲ, မြင့်သိပ်သည်းဆလက်မောင်းကို ရွေးချယ်. ထိုအတားအဆီးကိုတက်သဖြင့်, လုံးလေးများလောင်လေ၏။ နှစ်ဦးစလုံးလက်မောင်းရာအရပျထဲမှာအတားအဆီးခဲ့သည့်အခါကြွက်နှင့်အတူမကြာသေးမီကသည် T-ဝင်္လေ့လာမှုမှာအတားအဆီးတွေနဲ့လက်ရုံး၏ haloperidol လျှော့ချရွေးချယ်မှုစဉ်, ဒီမူးယစ် (ရွေးချယ်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့Pardo et al ။ , 2012) ။ ထို့ကြောင့် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးအားဖြည့်ပြင်းအားအပျေါမှာအခြေခံပြီး preference ကိုပြောင်းလဲပစ်မနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု, မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်လက်မောင်း preference ကိုဆက်စပ်သောဆာပသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ Bardgett et al ။ , 2009 အဆိုပါဝင်္၏မြင့်သိပ်သည်းဆလက်မောင်းအတွက်အစားအစာ၏ပမာဏကိုကြွက်ကြောင့်လက်မောင်းကိုရှေးခယျြထားတဲ့အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေးလျော့ခဲ့သည့်အတွက်တာဝန်, ဝတစ်ဦးကို T-ဝင်္အားထုတ်မှုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလျော့စျေး: D ၏အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်1 နဲ့ D2 ကြွက်ဟာအနိမ့်အားဖြည့် / အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်လက်မောင်းကိုရွေးချယ်လိမ့်မယ်လို့သူကပိုများပါတယ်ဖန်ဆင်းသောမိသားစုရန်။ စိတ်ကြွဆေး၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်တိုးပွားလာ DA ဂီယာ DA Transporter knockdown ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးအော်ပရေတာရှေးခယျြမှုလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းသောအမြင့်ဆုံးအားဖြည့် / မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုလက်မောင်း, (ရွေးချယ်ရာတွင်ဆီသို့ SCH23390 နှင့် haloperidol နှင့်လည်းဘက်လိုက်ကြွက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုပိတ်ဆို့ထားCagniard et al ။ , 2006).
ဒီဧရိယာအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စများတစ်ခုမှာချို့ယွင်း DA ဂီယာနှင့်အတူဖြစ်သောတိရစ္ဆာန်များအားထုတ်မှု-related တာဝန်များကိုအတွက်အလုပ်လိုအပ်ချက်များအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြစေရန်, ဒါမှမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်နှောင့်နှေး (ဥပမာကဲ့သို့သောအခြားအချက်တွေအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ် Denk et al ။ , 2005; Wanat et al ။ , 2010) ။ ယေဘုယျအားနှောင့်နှေးလျှော့အပေါ် DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ (မဟုတ်ဘဲရောထွေးဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြWade et al ။ , 2000; Koffarnus et al ။ , 2011), နှင့် Winstanley et al ။ , 2005 ကြောင်း DA လျော့ကျနှောင့်နှေးလျှော့မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး accumbens သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Floresco et al ။ , 2008 သူတို့နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်ပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများများအတွက်ထိန်းချုပ်ထားလျှင်ပင်ဝအဆိုပါ DA ရန် haloperidol ပြောင်းလဲကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ Wakabayashi et al ။ , 2004 နျူကလိယ၏ပိတ်ဆို့: D accumbens တွေ့ရှိခဲ့1 သို့မဟုတ်: D2 receptors အားဖြည့်ခံနိုင်ရန်အတွက်ကြာကြာနှင့်ကြာကြာအချိန်ကြားကာလစောင့်ဆိုင်းပါဝငျသောတိုးတက်သောကြားကာလအချိန်ဇယားအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အယှက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်အချိန်ကြားကာလလိုအပ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောအချိုးအစားလိုအပ်ချက်ရှိသည့်အားဖြည့်ခြင်းအားတွဲဖက်ဇယားများဖြင့်လေ့လာခြင်းက DA depletions များသည်တိရိစ္ဆာန်များအားထပ်မံအချိုးလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုထိရောက်စေပြီးတိရိစ္ဆာန်များအား ၃၀ မှ ၁၂၀ s မှအချိန်ကြားကာလလိုအပ်ချက်များကိုမထိခိုက်စေကြောင်းဖော်ပြသည်။Correa et al ။ , 2002; Mingote et al ။ , 2005).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ကြွက်များတွင် T ကဝင်္နှင့်အော်ပရေတာရှေးခယျြမှုလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအနိမ့် DA ရန်၏ဆေးများနှင့် DA လျော့ကျ accumbens နဂိုအတိုင်းမူလတန်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အားဖြည့်များ၏အခြေခံရှုထောင့်စွန့်ခွာ, ဒါပေမယ့်သို့ရာတွင်အမူအကျင့်ကို Activation လျှော့ချနှင့်၎င်းတို့၏ဆာပ reallocate မှတိရိစ္ဆာန်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ တုန့်ပြန်ရွေးချယ်ရေး task ကို၏တုံ့ပြန်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်မှာအခြေခံခြင်းနှင့်စစ်ကူရယူဘို့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်အခြားနည်းလမ်းကို select (Salamone et al ။ , 2007, Salamone et al ။ , 2012) ။ စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား mesolimbic DA သည်အခြားက transmitter (Adenosine, ဂါဘမြို့သားပါဝင်သောအမူအကျင့်ကို Activation နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းညှိမယ့်ကျယ်ပြန့် circuitry ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာညွှန်ပြ; Mingote et al ။ , 2008; Farrar et al ။ , 2008, Farrar et al ။ , 2010; Nunes et al ။ , 2010; Salamone et al ။ , 2012) နှင့်ဦးနှောက်ဧရိယာများ (basolateral amygdala, anterior cingulate cortex, ventral pallidum; ဝေါ်လ်တန် et al ။ , 2003; Floresco နှင့် Ghods-Sharifi, 2007; Mingote et al ။ , 2008; Farrar et al ။ , 2008; Hauber နှင့် Sommer, 2009).
အစာစားချင်စိတ် Motivation အတွက် Mesolimbic DA ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု: DA စနစ်များ၏ Dynamic Activity ကို
ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်နျူကလိယ DA လွှတ်ပေးရန် accumbens သို့မဟုတ် ventral tegmental DA အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်အပြုသဘောစစ်ကူ၏တင်ပြချက်အားဖြင့်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည်သည်လှုံ့ဆော်မှု appetitive မှ mesolimbic DA ၏တုန့်ပြန်ဖော်ပြစာပေ (အမှန်တကယ်အတော်လေးရှုပ်ထွေးကြောင်းသိရသည်ပေမယ့်Hauber, 2010) ။ အထွေထွေသဘောနဲ့, အစားအစာတင်ဆက်မှုတိုး DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် accumbens DA လွှတ်ပေးရန်သနည်း အခြေအနေများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အဆင့်သို့မဟုတ်ရှုထောင့်နီးကပ်စွာ dopaminergic လှုပ်ရှားမှုများ၏ပယောဂချိတ်ဆက်ထားတဲ့လှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်, မှတစ်ဆင့်? ဤမေးခွန်းများကိုအဖြေတိုင်းတာခြင်း၏ timescale အပေါ်သို့မူတည်လျက်, တိကျသောအမူအကျင့်အခြေအနေများကိုလေ့လာခံရ။ DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအတက်အကျမျိုးစုံ timescales ကျော်ရာအရပ်ကိုယူနိုင်ပြီး, တစ်ဦးဂုဏ်ထူးမကြာခဏ "phasic" နှင့် "လုပ်သူများ" လှုပ်ရှားမှု (အကြားဖန်ဆင်းထားသည်တော်ကကျေးဇူး, 2000; Floresco et al ။ , 2003; goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ Electrophysiological မှတ်တမ်းတင်နည်းစနစ်, putative DA အာရုံခံ (ဥပမာ၏အစာရှောင်ခြင်း phasic လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် Schultz, 2010), နှင့် voltammetry နည်းလမ်းများ DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုပြီးတော့ Activision နေတာကနေဖြန့်ချိကိုယ်စားပြုထင်ထားတဲ့ extracellular DA အတွက်အစာရှောင်ခြင်း phasic အပြောင်းအလဲဖြစ်ကြောင်း (ဥပမာ, အစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry) စံချိန် DA "ယာယီ" (ဥပမာ, Roitman et al ။ , 2004; Sombers et al ။ , 2009; ဘရောင်း et al ။ , 2011) ။ ဒါဟာ (စ DA လွှတ်ပေးရေးအတွက်အစာရှောင်ခြင်း phasic အပြောင်းအလဲများကို DA အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏အတော်လေးလွတ်လပ်သောနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်နှင့်အစား presynaptic နီကိုတင်းအဲဒီ receptor ယန္တရားမှတဆင့် DA လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်ကြောင်း cholinergic striatal interneurons ၏ညှိပစ်ခတ်ရန်ထင်ဟပ်နိုင်ပါတယ်ဆန် et al ။ , 2011; Threlfell et al ။ , 2012; Surmeier နှင့် Graybiel, 2012) ။ Microdialysis နည်းလမ်းများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, electrophysiology သို့မဟုတ် voltammetry မှအချိန်နှင့်အာကာသဆွေမျိုးများ၏ပိုကြီးတဲ့ယူနစ်ကျော်ပေါင်းစည်းလွှတ်ပေးရန်နှင့်လွှာမှယန္တရားများ၏အသားတင်အကျိုးသက်ရောက် (ဥပမာကိုကိုယ်စားပြုမယ့်လမ်းအတွက် extracellular DA တိုင်းတာ, Hauber, 2010) ။ ထို့ကြောင့်ကမကြာခဏ microdialysis နည်းလမ်းများအတိုင်းအရှည် "လုပ်သူများ" DA အဆင့်ဆင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမိနစ်ကျော်ရာအရပ်ကိုယူ extracellular DA အတွက် microdialysis behavior- တိုင်းတာသို့မဟုတ် related အတက်အကျ drug- နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို (ဥပမာလျှောက်လျော့နည်းခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တိုးပွါး) ၏အမြင်များတွင်ပြုလုပ်ဖြစ်ကောင်းစကားပြောဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "အစာရှောင်ခြင်း phasic" employ မှအများဆုံးအသုံးဝင်သည် microdialysis နည်းလမ်းများ (ဥပမာအတူတိုင်းတာသည့်နှေးကွေးအချိန်အတိုင်းအတာကျော်ရာအရပ်ကိုယူသောအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ရည်ညွှန်းအတွက် electrophysiology သို့မဟုတ် voltammetery နှင့်အတူတိုင်းတာနိုင် DA-related လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျင်မြန်စွာသောအပြောင်းအလဲနှင့် "နှေးကွေး phasic" အကြောင်းကို Hauber, 2010; Segovia et al ။ , 2011).
Electrophysiology လေ့လာမှုများ (ဝတ္ထုသို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲအစားအစာကိုစစ်ကူ၏တင်ဆက်မှု putative ventral tegmental DA အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ယာယီတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားပေမယ့်ဒီအကြိုးသကျရောပုံမှန်တင်ဆက်မှုနှင့်အတူသွားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ပြ, ဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးမှတဆင့်ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်ပါပြီSchultz et al ။ , 1993; Schultz, 2010) ။ DA လွှတ်ပေးရေးအတွက်အစာရှောင်ခြင်း phasic ပြောင်းလဲမှုများကိုတိုင်းတာရန် voltammetry နည်းလမ်းများအလုပ်သမား, Roitman et al ။ , 2004 နှိပ်ကြောင်းလီဗာအချက်ပြ sucrose ပေးပို့မှုလိုလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်တစ်ဦးအေးစက်နှိုးဆွဖို့ထိတွေ့မှုပြသ DA ယာယီတစ်ခုတိုးလာသဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်သို့သော် sucrose စစ်ကူ၏အမှန်တကယ်တင်ဆက်မှုမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အလားတူတွေ့ရှိချက်များကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် Nishino et al ။ , 1987, မျောက်တွေကိုနှိပ်အခမဲ့-operation fixed အချိုးလီဗာလေ့လာ putative ventral tegmental DA အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့သူလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုနှိပ်လီဗာစဉ်အတွင်းတိုးပွားလာခဲ့သည်ပေမယ့်အမှန်တကယ်စစ်ကူတင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားသည်။ ခန့်မှန်းရခက်အစားအသောက်ပို့ဆောင်မှုအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဝေဟောကိန်းထုတ်ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်မှုသည်နျူကလိယအတွက် voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာမြန် phasic အချက်ပြတိုးမြှင့် core ကို accumbens (ဘရောင်း et al ။ , 2011) ။ ဥပမာ (DiChiara နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဝတ္ထုအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများနှင့်ထိတွေ့ယာယီနျူကလိယအတွက် extracellular DA တိုးမြှင့် shell ကို accumbens ကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့်ဒီတုံ့ပြန်မှုလျှင်မြန်စွာ habituated ကြောင်း Bassareo et al ။ , 2002) ။ မကြာသေးမီက microdialysis စက္ကူယခင်ကထိတွေ့ကြွက်မှမြင့်မားသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်အစာကိုစစ်ကူ၏တင်ဆက်မှု accumbens core ကိုသို့မဟုတ် shell ကို (အတွင်း extracellular DA အတွက်မဆိုပြောင်းလဲမှုထုတ်လုပ်ရန်မပြုခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြSegovia et al ။ , 2011) ။ ဆနျ့ကငျြ, fixed အချိုးလီဗာကိုနှိပ်များ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှစ်ဦးစလုံး (DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Segovia et al ။ , 2011) ။ DA-related signal ကို transduction (ဂ-Fos နှင့် DARPP-32) ၏အမှတ်အသားများတိုင်းတာခဲ့ကြသည်သည့်အခါတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူပုံစံ (ပြသခဲ့သည်Segovia et al ။ , 2012) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏အပါအဝင်နှုန်း se အစားအစာတင်ဆက်မှု, တစ်ပုံစံတည်းအခြေအနေများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီး accumbens DA လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးကြောင်း။ အိုင်ဒီယာကိုထောက်ပံ့ကြဘူး
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထား DA ဂီယာအတွက်တိုးထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကစစ်ကူတွေနဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏တင်ပြချက်, ဒါမှမဟုတ်ဆာပအပြုအမူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောညွှန်ပြပါဘူး, ဤ (microdialysis နှငျ့ပတျသကျသောလေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးSokolowski နှင့် Salamone, 1998; Ostlund et al ။ , 2011; Hauber, 2010; Segovia et al ။ , 2011), voltammetry (Roitman et al ။ , 2004; ဘရောင်း et al ။ , 2011; Cacciapaglia et al ။ , 2011), နှင့် electrophysiological အသံသွင်းတုံ့ပြန်အခမဲ့အော်ပရေတာကာလအတွင်း (Nishino et al ။ , 1987; Kosobud et al ။ , 1994). Cacciapaglia et al ။ , 2011 voltammetry ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်နျူကလိယ accumbens အတွက် phasic DA လွှတ်ပေးရန်အစာရှောင်ခြင်းစစ်ကူရရှိနိုင်မှုအချက်ပြတဲ့ cue ၏စတင်ခြင်းအဖြစ်လီဗာစာနယ်ဇင်းတုံ့ပြန်စဉ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းအစီရင်ခံနှင့် accumbens အာရုံခံပေါ်မှာဤ phasic လွှတ်ရာ excitatory သက်ရောက်မှုပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်၏ inactivation အားဖြင့်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေခဲ့ ventral tegmental DA အာရုံခံ၌တည်၏။ ထို့အပွငျ electrophysiology သုတေသနတစ်ခုသိသိသာသာခန္ဓာကိုယ် putative ventral tegmental DA မူလတန်းစစ်ကူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောလှုံ့ဆော်မှု၏တင်ဆက်မှုအပါအဝင်အာရုံခံ, အဖြစ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအားဖြည့်တန်ဖိုးကိုဆွေမျိုးရှိသည်သောအခြေအနေများအတွက်ပစ်ခတ် burst ကိုသက်ဝင်သောအခြေအနေများအချို့ကိုဖော်ထုတ်ထားပါတယ် ယခင်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မျှော်လင့် (Schultz et al ။ , 1997) ။ အဆိုပါနောက်ပိုင်းတွင်လေ့လာရေး DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုဥပမာ (သင်ယူခြင်းအချို့မော်ဒယ်အားဖြင့်ဖော်ပြထားခန့်မှန်းအမှား signal ကိုမျိုးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သောအယူအဆမှဦးဆောင်ခဲ့ပြီး Rescorla နှင့် Wagner, 1972) ။ putative DA အာရုံခံအတွက်လှုပ်ရှားမှု၏ဤပုံစံ (အားဖြည့်သင်ယူမှုမော်ဒယ်များအတွက်အစာရှောင်ခြင်း phasic DA အချက်ပြ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်တရားဝင်သီအိုရီအခြေခံပေးထားSchultz et al ။ , 1997; Bayer နှင့် Glimcher, 2005; တဖန်, 2009; Schultz, 2010).
ပစ္စုပ္ပန်စက္ကူ၏အဓိကအာရုံစိုလှုံ့ဆျောမှု၏ကွဲပြားရှုထောင့်အပေါ် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေး၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ဖြစ်သော်လည်းကြောင့်နှောင့်အယှက်ကြောင့်အခြေအနေများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွဘို့အချက်ပြအစာရှောင်ခြင်း phasic နှင့်နှေးကွေးသော phasic (ဆိုလိုသည်မှာ "လုပ်သူများ") ၏အရေးပါမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အသုံးဝင်သည် DA ဂီယာနှင့်အတူ။ dopaminergic လှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသော timescales အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအစေခံနိုင်ကြောင်း, ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ခြယ်လှယ်များ၏သက်ရောက်မှုအလွန်ကအစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်နှေးကွေး phasic လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် DA ၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနေသည်ရှိမရှိအပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ်။ သုတေသီများ (differential နှေးကွေးအချိန်အကြေးခွံပေါ် DA လွှတ်ပေးရန်သာရှိပြီးပြည်ပမှအစာရှောင်ခြင်း phasic DA လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမှအမျိုးမျိုးသော pharmacological သို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇထိန်းသိမ်းရေးကိုအသုံးပြုခဲ့ကြZweifel et al ။ , 2009; က Parker et al ။ , 2010; Grieder et al ။ , 2012) နှင့်ထိုအထိန်းသိမ်းရေးကွဲပြားအပြုအမူသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုနိုင်သည်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။ ဥပမာ, Grieder et al ။ , 2012 phasic DA လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူရွေးချယ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နီကိုတင်း၏တစ်ခုတည်းစူးရှထိုးရာမှဆုတ်ခွာဖို့မဟုတ်ဘဲနာတာရှည်နီကိုတင်းကနေဆုတ်ခွာဖို့အခွအေနေအရပျကိုဆန္ဒရှိ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတားဆီးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, D2 receptors ၏ပိတ်ဆို့စူးရှသောနာတာရှည်, ဒါပေမယ့်မပေးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း conditional ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးချို့ယွင်း။ Zweifel et al ။ , 2009 VTA DA အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်ပေါကျကှဲကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေရာ NMDA receptors ၏ရွေးချယ်မျိုးရိုးဗီဇ inactivation, သင်ယူခြင်း cue မှီခိုစာစားချင်စိတ်ကို၏ဝယ်ယူချို့ယွင်းကြောင်းအစီရင်ခံသို့သော်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်အစားအသောက်အားဖြည့်များအတွက်အလုပ်လုပ်များ၏အပြုအမူနှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့, DA-related အပြုအမူလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏နံပါတ် (ချို့ယွင်းအစာရှောင်ခြင်း phasic DA လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်မတော်မူZweifel et al ။ , 2009; Wall et al ။ , 2011; က Parker et al ။ , 2010) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက် DA ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ကျ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောသူတို့နှင့်အတူအစာရှောင်ခြင်း phasic လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ဘို့သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, သူတို့ကမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ် DA လျော့ကျအသုံးပြုသောအခါအာရုံချို့ယွင်းသောအမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတဦးတည်း (DA လွှတ်ပေးရန်တစ်ဦး "သင်ကြားမှု signal ကို" အဖြစ်ပြုမူကြောင်း, ဥပမာ) electrophysiology သို့မဟုတ် voltammetry ၏လေ့လာမှုများအတွက်ထုတ်ပေးအယူအဆကနေ generalizing အတွက်သတိထားဖြစ်ရမည်ကြောင်းအကြံပြု DA ဂီယာနှောင့်အယှက်ရန်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် mesolimbic DA အာရုံခံ၏အစာရှောင်ခြင်း phasic လှုပ်ရှားမှု၏လေ့လာမှုများလျှင်မြန်စွာ DA လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့သောအခြေအနေများ explicate တစ်ခုသို့မဟုတ် discrete DA signal ကိုပေးစေခြင်းငှါညွှန်ပြပေမယ့်တင်းကြပ်စွာမျိုးစုံဖြတ်ပြီး DA ဂီယာအားဖြင့်ဖျော်ဖြေလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းရန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားကြဘူး timescales သို့မဟုတ် DA ဂီယာ၏နှောင့်အယှက်များကအာရုံချို့ယွင်းသူတွေကို။
အစာစားချင်စိတ်တူရိယာဆိုင်ရာသင်ယူအတွက် Mesolimbic နှင့် Neostriatal ယန္တရားများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု
တဦးတည်းကိုအခြားဆောက်လုပ်ရေးကနေကွဲပြားစေအသုံးအနှုန်းများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုသတ်မှတ်နိုငျသျောလညျးကအသိအမှတ်ပြုရပါမည်, အပြည့်အဝအမူအကျင့်လက္ခဏာများသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောအခြေခံဖြစ်စေဆွေးနွေးခြင်းအတွက်တဦးတည်းလည်းဆက်စပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကိုသေသပ်စွာ discrete non-ထပ်အာရုံကြောစနစ်များသို့ core ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုခွဲခြားကြောင်း box ကို-and မြှားကားချပ်သို့မဟုတ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကွောငျ့ (ထိုကဲ့သို့သော homeostasis, allostasis, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, သိမှတ်ခံစားမှု, သင်ယူမှု, အားဖြည့်, အာရုံခံစားမှုနှင့်မော်တာ function ကိုအဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားစပ်လျဉ်းနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်Salamone, 2010) ။ ဥပမာ, Panksepp, 2011 ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုကွန်ရက်များအဘက်ဘက်မှအထောက်အကူထိုကဲ့သို့သောရှာ, ဒေါသသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်အဖြစ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များနှင့်အတူ interwoven နေကြသည်ကိုဘယ်လိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရှာကြံ / ဆာပအပြုအမူလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများကလွှမ်းမိုးနေသည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်း, သင်တန်း, လုပ်ငန်းစဉ်လေ့လာသင်ယူ။ တိရစ္ဆာန်များအထူးသဖြင့်အားဖြည့်ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတိကျတဲ့ဆာပတုံ့ပြန်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သင်ယူပါ။ ဆာအေးစက်၏ The Associated ဖွဲ့စည်းပုံ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်, သက်ရှိလုပ်ရပ်များလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာအရေးယူ-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များ) ပေးသောဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမော်တာ, သိမြင်မှု, စိတျပိုငျးဆိုငျရာနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာ (နဲ့အတူရောယှက်နေကြMogenson et al ။ , 1980) ။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်သဘာဝကစစ်ကူအဘို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် mesolimbic DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအပျေါမှာအာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သော်လည်း, ကလည်းဆာပသင်ယူမှုအတွက် mesolimbic DA ၏ putative ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အကျဉ်းချုံးဆွေးနွေးချက်တခုရှိသည်ဖို့အသုံးဝင်သည်။
တဦးတည်းကနျူကလိယ DA အားဖြည့်သင်ယူမှု mediates တစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်ကူ (ဆိုလိုသည်မှာအရေးယူ-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များ) ၏ပေးပို့နဲ့အော်ပရေတာတုံ့ပြန်မှုများ၏အသင်းအဖွဲ့အခြေခံသည့် Synaptic plasticity လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါတယ် accumbens သရုပ်ပြအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သုတေသန၏ဤဧရိယာအထက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စိတ်ခွန်အားနိုးသုတေသနအဖြစ်အနက်ကိုဘော်ပြအဖြစ်ခက်ခဲများနှင့်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, Smith က-သမင်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီ, 2000 DA: D ၏တစ်ပြိုင်နက်ပိတ်ဆို့ပြသ1 နှင့်နျူကလိယအတွက် NMDA receptors core ကိုနှိပ်ဆာလီဗာ၏ဝယ်ယူ retarded accumbens ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးကိုထိခိုက်ကြောင်း postsession ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်း (နှိပ်ဆာလီဗာ၏ဝယ်ယူထိခိုက်ဟာနန်ဒက်ဇ် et al ။ , 2002) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, နျူကလိယ accumbens နှင့်ဆာပသင်ယူမှုအပေါ်စာပေပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် Yin et al ။ , 2008 "ဟုအဆိုပါ accumbens ဆာပသင်ယူမှုများအတွက်လိုအပ်သောမဟုတ်သလိုလုံလောက်သောမဖြစ်၏။ " နိဂုံးချုပ်အလားတူပင် Belin et al ။ , 2009 နျူကလိယ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအဓိကအားဖြင့်တွေ့ရှိမှုကသဘာဝလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်အားဖြည့်ပေးသောအပြုအမူများရရှိခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပြီး၊ ဆဲလ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတွေ့ရှိခြင်း၊ DA ဆန့်ကျင်သူများ (သို့) DA ​​ကုန်ခမ်းခြင်းများသည်လေ့လာမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရလဒ်များအားနေရာထားခြင်း၊ လီဗာနှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုပြသသည့်လေ့လာမှုများစွာရှိသော်လည်း၎င်းသည်နျူကလိယသည်အာရုံခံဆဲလ်များကိုစုဆောင်းကြောင်းပြသသည်မဟုတ်ပါ။ mesolimbic DA ဂီယာသည်ကိရိယာတန်ဆာပလာသင်ယူခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သောသီးခြားအသင်းအဖွဲ့များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် (Yin et al ။ , 2008) ။ ဆာသင်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်သောတိကျသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမကြာခဏဆေးဝါးဗေဒသို့မဟုတ်တွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများအတွက်ကောက်ယူကြသည်မဟုတ်သည့်စစ်ကူတန်ဖိုးသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်း၏သက်ရောက်မှု၏အကဲဖြတ်ဖြင့်သရုပ်ပြနိုင်ပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ဒါကြောင့် (ထို accumbens ၏အမာခံသို့မဟုတ် shell ကိုဖြစ်စေထဲမှာဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းမှ sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်မပြုခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်Corbit et al ။ , 2001). Lex နှင့် Hauber, 2010 နျူကလိယနှင့်အတူကြွက် DA လျော့ကျနေဆဲတန်ဖိုး reinforcer မှအထိခိုက်မခံ ရှိ. , accumbens core ကို DA ထို့ကြောင့်အရေးယူ-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များကုဒ်သွင်းမှုအတွက်အလွန်အရေးပါမဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြု accumbens ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမရှင်းလင်းပေမဲ့ accumbens DA တုံ့ပြန်မှုနှင့်စစ်ကူများအကြားအသင်းအဖွဲ့များများအတွက်အရေးပါလျှင်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများကြောင့်နျူကလိယ DA (Pavlovian ချဉ်းကပ်ဘို့အအရေးကြီးသောနှင့်ဆာလွှဲပြောင်းဖို့ Pavlovian ဖြစ်ပါတယ် accumbens ညွှန်ပြပါကင်ဆန် et al ။ , 2002; Wyvell နှင့် Berridge, 2000; Dalley et al ။ , 2005; Lex နှင့် Hauber, 2008, Lex နှင့် Hauber, 2010; Yin et al ။ , 2008) ။ ထိုသို့သောဆိုးကျိုးများ (အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဆာပအပေါ်သို့သက်ဝင်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုနိုငျသောအားဖြင့်တစ်ဦးယန္တယားများကိုနိုင်Robbins နှင့် Everitt, 2007; Salamone et al ။ , 2007), အထက်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း။ တက်ကြွစွာသို့မဟုတ် conditional လှုံ့ဆော်မှု၏နှိုးဆွသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုပြီးသားဝယ်ယူဆာပတုံ့ပြန်မှုချဲ့အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဒါပေမယ့်လည်းအားဖြင့်အားဖြည့်အတူနေတဲ့တုန့်ပြန်တွဲဖို့ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အခါသမယ setting, တုန့်ပြန်အထွက်နှင့်အမူအကျင့်များပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူမြှင့်တင်ရန်ပြုမူနိုင်ဘူး။ မကြာသေးမီကစက္ကူ ventral tegmental DA အာရုံခံ၏ optogenetic ဆွ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကိုနှိပ်ဆာလီဗာ၏အပြုသဘောအားကောင်းမပေးခဲ့ပါဘူးနှင့်အစားအစာစားသုံးမှုမထိခိုက်ခဲ့ပါကြောင်းပြသပေမယ့်ဝယ်ယူစဉ်ကတက်ကြွစွာလီဗာပေါ်နှိပ်အစားအစာ-အားဖြည့်လီဗာပေါ်ပေါက်ရေးများကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ခဲ့ပါ ယခင်ကငွိမျးဆာပတုံ့ပြန်မှု၏ output ကို (Adamantidis et al ။ , 2011).
စိတ်ဝင်စားစရာပင် DA: D ၏နောက်ကောက်သော်လည်း1 receptors, အစားအစာ-ဆက်စပ်တွေကိုတင်ဆက်နေဖြင့်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟာအစာရှောင်ခြင်း phasic DA လွှတ်ပေးရန်အတွက် 3-ခြံကျဆင်းခြင်းအကျိုးဆက်အရာ, NMDA receptors ၏နောက်ကောက် Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ (Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူနှောင့်နှေးကြဘူးက Parker et al ။ , 2010) ။ ဤသည်မြန်ဆန် phasic DA လွှတ်ပေးရန်နှင့်သင်ယူမှုအကြားဆက်စပ်မှုမသေချာမရေရာဖြစ်နေဆဲကြောင်းဖော်ပြသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်အားဖြည့်သင်ကြားမှုကိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြု၍ မြန်ဆန်သော phasic DA အချက်ပြမှုအားအကျိုးသက်ရောက်စေသောအသုံးချမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ ထို့အပြင်အစာရှောင်ခြင်း phasic DA လှုပ်ရှားမှု၏ဖိနှိပ်မှုကို ဦး တည်စေသောမျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆေးဝါးဗေဒနည်းလမ်းများသည်၎င်းတို့၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအားထုတ်မှုဆိုင်ရာရှုထောင့်များအပေါ်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ထပ်မံအကဲဖြတ်သင့်သည်။
DA စနစ်များ၏ Dynamic လုပ်ဆောင်ချက်: ဆန္ဒရှိ Motivation and သင်ယူအတွက် Mesolimbic DA ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု
အဆိုပါ DA စာပေအချို့ဆောင်းပါးဇယားကိုတစေ့တစောင်းပြန်လည်သုံးသပ်သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆန္ဒရှိရှုထောင့်များဖယ်ရန်, mesolimbic DA hedonic လုပ်ငန်းစဉ်များ, အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အားဖြည့်-related သင်ယူမှုအတွက်ရွေးချယ်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းထင်မြင်နှင့်တသားတထားခဲ့ပါနိုင်ဘူး။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအမြင်စာပေနှင့်အတူကှဲလှဲမှာပါလိမ့်မည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားကြောင်း DA ဂီယာတိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်မှုမှ hedonic တုံ့ပြန်မှုဖျန်ဖြေပါဘူး accumbens ဖော်ပြသည်။ ထိုမှတပါး, mesolimbic DA ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်နှင့်ဆန္ဒရှိသင်ယူမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်အပြုအမူကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြနေတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့စာပေလည်းမရှိ။ microdialysis နည်းလမ်းများဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်တစ်ဦးကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဆန္ဒရှိအခြေအနေများအရေအတွက် (ဥပမာ, ထိတ်လန့်, အမြီးအဖြစ်တော့, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု, ဆန္ဒရှိ conditional လှုံ့ဆော်မှု, ဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဝါးများ, လူမှုရေးရှုံးနိမ့်) (DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်McCullough et al ။ , 1993; Salamone et al ။ , 1994; Tidey နှင့် Miczek, 1996; လူငယ်တို့, 2004) ။ နှစ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ် ventral tegmental DA အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုတိုးမခံခဲ့ရကြောင်းထင်ရ၏ သို့သော်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများ (putative သို့မဟုတ်ဖော်ထုတ် DA အာရုံခံ၏ electrophysiological လှုပ်ရှားမှုဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအားဖြင့်တိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီAnstrom နှင့် Woodward, 2005; Brischoux et al ။ , 2009; Matsumoto နှင့် Hikosaka, 2009; Bromberg- မာတင် et al ။ , 2010; Schultz, 2010; Lammel et al ။ , 2011) ။ ပေမဲ့ Roitman et al ။ , 2008 တစ်ဦးဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှု (ကွီနိုင်) နျူကလိယ accumbens အတွက် DA ယာယီလျော့နည်းသွားကြောင်းအစီရင်ခံ Anstrom et al ။ , 2009 electrophysiology နှင့် voltammetry နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအစာရှောင်ခြင်း phasic DA လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့ကွောငျးလေ့လာသည်။ မသေချာမရေရာထိုကြောင့် appetitive မှ differential ကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းသီးခြား DA အာရုံခံခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အာရုံခံအဘယ်အချိုးအစားချင်းစီတုံ့ပြန်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်နေဆဲပေမယ့် mesolimbic DA လှုပ်ရှားမှုကအနည်းဆုံးအချို့ဆန္ဒရှိအခြေအနေများအားဖြင့်တိုးမြှင့်နိုင်နည်းနည်းသံသယရှိပုံနှင့် အထူးသ hedonia သို့မဟုတ်အပြုသဘောအားကောင်းရန်ချည်ထားခြင်းမရှိပါ။
နောက်ကျောအများအပြားဆယ်စုနှစ် (ယ့်သက်သေအထောက်အထားများတစ်ဦးကသိသိသာသာကိုယျခန်ဓာSalamone et al ။ , 1994) နှင့်မကြာသေးမီကစာပေမှဆက်လက် (Faure et al ။ , 2008; Zweifel et al ။ , 2011) DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အယှက်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ တကယ်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, DA ရန် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတုံး၎င်းတို့၏စွမ်းရည်အပေါ်မှာအခြေခံ antipsychotic လှုပ်ရှားမှုအတွက် preclinical စိစစ်ခံယူSalamone et al ။ , 1994) ။ Accumbens DA လျော့ကျ (နှိပ်ထိတ်လန့်ရှောင်ရှားခြင်းလီဗာအယှက်McCullough et al ။ , 1993) ။ DA ရန်၏စနစ်သို့မဟုတ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ထိုးလည်းနေရာအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်နှင့်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက် (များ၏ဝယ်ယူနှောင့်အယှက်Acquas နှင့် Di Chiara, 1994; Fenu et al ။ , 2001), အဖြစ်ကိုကွောကျရှံ့အေးစက် (Inoue et al ။ , 2000; Pezze နှင့် Feldon, 2004). Zweifel et al ။ , 2011 အစာရှောင်ခြင်း phasic DA လွှတ်ပေးရန်လျှော့ချရန်ပြုမူရသော NMDA receptors ၏နောက်ကောက်, cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ဝယ်ယူချို့ယွင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
လူ့လေ့လာမှုများလည်းဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုနှင့်သင်ယူမှု၏ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ ventral striatum များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြပါပြီ။ Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူစစ်စစ်ပြန်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာတိုက်ခိုက်ရေးအသံ၏တင်ဆက်မှုတုံ့ပြန် ventral striatum / နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့်သွေးစီးဆင်းမှုပြသ; Liberzon et al ။ , 1999) ။ လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ ventral striatal BOLD တုံ့ပြန်မှု, fMRI ဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, မသက်ဆိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှု (ကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များဟောကိန်းထုတ်ရှိမရှိ၏ခန့်မှန်းအမှားများကိုတုန့်ပြန်တိုးလာဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြJensen et al ။ , 2007), နှင့်ဆန္ဒရှိခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများပါ (DA ရန် haloperidol ပိတ်ဆို့ခဲ့Menon et al ။ , 2007). Baliki et al ။ , 2010 ပုံမှန်ဘာသာရပ်များတွင် phasic BOLD တုန့်ပြန်မှုများသည်စတင်ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုရှိသောအပူလှုံ့ဆော်မှု၏ offset နှစ်ခုစလုံးသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ Delgado et al ။ , 2011 ventral striatal BOLD တုန့်ပြန်မှုသည်အဓိကဆန့်ကျင်သောလှုံ့ဆော်မှု (ထိတ်လန့်ခြင်း) အပြင်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကာလအတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လူသားများတွင် DA လွှတ်ပေးမှုကိုအကဲဖြတ်ရန် in vivo raclopride ရွှေ့ပြောင်းမှုတိုင်းတာမှုများကိုရရှိသော PET လေ့လာမှုတစ်ခုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုသည် ventral striatum တွင် extracellular DA ၏အမှတ်အသားများကိုတိုးမြှင့် cortisol ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။Pruessner et al ။ , 2004) ။ ထို့ကြောင့်လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုလည်း ventral striatum နှင့်၎င်း၏ mesolimbic DA innervation ဆန္ဒရှိအဖြစ်စာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုကြောင်းပြသပါ။
အချုပ်အားဖြင့် DA အပေါ်“ hedonia” ၏ဖျန်ဖြေသူနှင့် DA ထုတ်လွှင့်မှုကို“ ဆု” (နှင့်“ hedonia” နှင့်“ ဆု”) သည်တူညီသောစိတ်သဘောထားသည် dopaminergic ပါ ၀ င်မှုအပေါ်အထူးအာရုံစိုက်ရန်လမ်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်အပြုအမူ activation, အားထုတ်မှု၏အားထုတ်မှု, cue လှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်မှု, ဖြစ်ရပ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် Pavlovian ဖြစ်စဉ်များအပါအဝင်နှင့်သင်ယူခြင်း -related ဖြစ်စဉ်များ (ပုံ 2) ။ နျူကလိယ accucens အတွက် DA ဂီယာအရသာအပေါ် hedonic တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အစွမ်းထက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပါဘူး, မကအဓိကအစားအစာလှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ဖြန်ဖြေဖို့ပုံပေါ်ပါဘူး (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2002; ကယ်လီ et al ။ , 2005; Barbano et al ။ , 2009) ။ dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာသင်ယူအပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အမူအကျင့်ရလဒ်များထိခိုကျနိုငျသျောလညျးထို့အပြင်, DA ပုနျဆာပအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့်အားဖြည့်ရလဒ်ကို (ပါဝငျကွောငျးနျဆာပသင်ယူမှု၏တိကျသောအသှငျအပွငျအဘို့အရေးကြီးသည် accumbens ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားမရှိYin et al ။ , 2008) ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, (DA ရှင်းလင်းစွာအစာစားချင်စိတ်များရှုထောင့်အဖြစ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည် accumbensSalamone et al ။ , 2007; Cabib နှင့် Puglisi-Allegra, 2012) နှင့်ကအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဆာလွှဲပြောင်းဖို့ Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုနှင့် Pavlovian ပါဝင်ကြောင်းဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်လေ့လာသင်ယူအတွက်ပါဝင် (Yin et al ။ , 2008; Belin et al ။ , 2009) ။ accumbens DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်အစားအစာဖြန့်ဝေကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေကိုအားဖြင့်ရူးနှမ်းရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှုချို့ယွင်းနေသောတွေကိုအားဖြင့်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်း Pavlovian ချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုများ၏ဝယ်ယူ blunts ။ Accumbens DA လျော့ကျသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ဝင်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်-related မှနျဆာပတုံ့ပြန်မှုကုန်ကျစရိတ် (ဥပမာကြီးမားတဲ့အချိုးလိုအပ်ချက်နှင့်အတူအချိုးအချိန်ဇယား၏ output ကို, အတားအဆီးတောင်တက်တိရိစ္ဆာန်များအလွန်အထိခိုက်မခံစေ; Salamone et al ။ , 2007, Salamone et al ။ , 2012; Barbano et al ။ , 2009) ။ ထို့ကြောင့် DA နျူကလိယသည် DA ကိုစေ့ဆော်မှု၏လှည့်စားမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ရှင်းလင်းစွာပါ ၀ င်သည်။ အချို့သောကိရိယာတန်ဆာပလာလုပ်ငန်းများသည် mesolimbic DA (ဥပမာအားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှု၏လှုပ်ရှားမှုရှုထောင့်၊ အားစိုက်ထုတ်ခြင်း) မှခွဲဝေထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသာပုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် mesolimbic DA ၏ချို့ယွင်းမှုသည်ဤတာ ၀ န်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလွယ်တကူသက်ရောက်သည်။ လှုံ့ဆျောမှု, နဂိုအတိုင်းကျန်ကြွင်းနေကြသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကပေါ်ထွက်လာသောပုံမှာ neostriatum (ဆိုလိုသည်မှာ dorsal striatum) နှင့်၎င်း၏ DA innervation သည်နျူကလိယ accumbens ထက်တူရိယာအသင်းအဖွဲ့များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ link ကိုရှိပုံရသည် (Yin et al ။ , 2008) ။ စစ်ကူတန်ဖိုးနှင့်အရေးပေါ်ပျက်စီးခြင်းနှစ်ဦးစလုံးမှအာရုံမခံစားနိုင်သောအဆိုပါ dorsomedial neostriatum လုပ်တိရစ္ဆာန်များ၏တွေ့ရှိရပါသည် (Yin et al ။ , 2005) ။ dorsolateral striatum အတွက်နှစ်ဦးစလုံးဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် DA လျော့ကျ (အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအယှက်ပြခဲ့ကြYin et al ။ , 2004; Faure et al ။ , 2005) ။ အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအတွက် neostriatum များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအရေးယူပာသို့မဟုတ်နျဆာပအပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းများ "Chunk" (၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက် Basal ganglia ၏တွေးဆအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်Graybiel, 1998; Matsumoto et al ။ , 1999) ။ အလေ့အကျင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသည့် neostriatal ယန္တရားများအားတုန့်ပြန်မှုဆိုင်ရာ ventral ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းမှကူးပြောင်းခြင်းဟူသောအယူအဆကိုမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏လက္ခဏာများကိုရှင်းပြရန်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Belin et al ။ , 2009) နှင့်လည်းသဘာဝအားဖြည့်များ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သက်ဆိုင်သည် (Segovia et al ။ , 2012) ။ သို့သော်ဤအခြေအနေတွင်ကြောင့်နျူကလိယ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဆာပသင်ယူမှုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်, ဒါမှမဟုတ်အရေးယူ-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များသို့မဟုတ်အလေ့အထဖွဲ့စည်းခြင်း၏ encoding ကထိန်းညှိအတွက် neostriatal DA များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ DA accumbens ဤမဆိုလိုပါကြောင်းအလေးပေးဖို့အသုံးဝင်သည် သက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကစစ်ကူအဘို့အမူလတန်းလှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ပေါ်လုပ်ရပ်များကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ, Smith က-သမင်ဒရယ်နှင့်ကယ်လီ, 2000 တစ် ဦး: D ၏ပေါင်းစပ်ဆေးထိုးပြသခဲ့သည်1 အစားအစာ-အားဖြည့်လီဗာကိုနှိပ်၏ချို့ယွင်းဝယ်ယူအစားအစာစားသုံးမှုကိုထိခိုက်နှင့်ဤခြယ်လှယ်တစ်ဦးယေဘုယျစိတ်ခွန်အားနိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုမရှိခြင်းသရုပ်ပြအဖြစ်ဤရလဒ်အနက်မဆေးများမှာရန်နှင့်တစ်ဦး NMDA ရန်။ ထိုမှတပါး, dorsolateral neostriatum အတွက် DA ဂီယာနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက် (အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအယှက်မှပြသပေမယ့်နဂိုအတိုင်းတုံ့ပြန် (ဆိုလိုသည်မှာ motivationally မောင်းနှင်) ဂိုးညွှန်ကြားစွန့်ခွာခဲ့သည်Faure et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့်, nostriatal DA ၏အလေ့အထကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်မူလအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ကို dopaminergic စေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထားမပြပါ။ ventrolateral neostriatum တွင် DA depletter များကြောင့်အစားအစာစားသုံးမှုသည်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤချို့ယွင်းမှုသည်အစာကျွေးနေစဉ်နို့တိုက်ကျွေးမှုနှုန်းနှင့်အသားကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့် motoric disfunctions နှင့်ဆက်စပ်သည်။ Parkinsonian အနားယူခြင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများပါသည့်ပါးစပ်တုန်ခါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။ တုန်ခါ (Jicha နှင့် Salamone, 1991; Salamone et al ။ , 1993; Collins-Praino et al ။ , 2011).
၎င်းသည် hedonia သို့မဟုတ်အဓိကအစားအစာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းမှတ်သားရန်မဟုတ်သော်လည်းနျူကလိယမှ DA သည်ဤနျူကလိယမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားလာနေသောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားကိုထိန်းညှိပုံပေါ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသီများက Basal ganglia အဆောက်အအုံများသည် sensorimotor function ကိုထိန်းညှိသူများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြပြီး Basal ganglia နှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းသောသွက်ချာပါဒသို့မဟုတ်မော်တာမစွမ်းနိုင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အပြုအမူ output ကိုအပေါ်အာရုံခံ input ကို၏သက်ရောက်မှု၏တံခါး (ဆိုလိုသည်မှာတံခါးခုံ) ၌တည်၏။ အလားတူ Mogenson et al ။ , 1980 နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနျူကလိယ accumbens သည်“ limbic-motor” interface တစ်ခုအဖြစ်ပြုမူသည်ဟုယူဆပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော limbic area များနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ output ကိုထိန်းညှိပေးသည့်အာရုံကြောဆားကစ်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုပေးခဲ့သည်။ အရင်းအမြစ်များစွာမှသိသာထင်ရှားသည့်သက်သေအထောက်အထားများအရနျူကလိယ accumbens သည် ဦး နှောက်၏အမျိုးမျိုးသောမော်တာtoရိယာများသို့သွားသော cortical သို့မဟုတ် limbic ဒေသများမှဖြတ်သန်းသွားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဂိတ်တစ်ခု၊ filter တစ်ခုသို့မဟုတ် amplifier အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ Roesch et al ။ , 2009) ။ Electrophysiological နှင့် voltammetry လေ့လာမှုများကြောင့်နျူကလိယ accumbens ညွှန်ပြ DA (ဖွငျ့ modulated ဖြစ်ကြောင်းတာဝန်-တိကျတဲ့အာရုံခံ၏ ensembles နှင့် microcircuits သို့ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်O'Donnell, 2003; Carelli နှင့် Wondolowski, 2003; Cacciapaglia et al ။ , 2011). Roesch et al ။ , 2009 ကြောင်းနျူကလိယတွင် neuron ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်သောမော်တာ output ကို၏အင်္ဂါရပ်များ (ဆိုလိုသည်မှာတုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှု) နဲ့မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ် accumbens သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ DA လွှတ်ပေးရေး (ကျိုးနပ်ကုန်ကျစရိတ်အသုံးစရိတ်များများအတွက်တံခါးခုံကိုမသတ်မှတ်စေခြင်းငှါ, အချို့သောအခြေအနေများတွင်အရင်းအမြစ်များကိုအမြတ်ထုတ်ဘို့တခုအခွင့်အရေးယူ drive ကိုပေးစေခြင်းငှါFields et al ။ , 2007; Gan et al ။ , 2010; Beeler et al ။ , 2012) ။ ဤသည်မှာအကြံပြုချက် (အထူးသဖြင့်ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဆာပအပြုအမူများ၏အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒအတွက် accumbens DA ၏အဆိုပြုပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Salamone et al ။ , 2007, Salamone et al ။ , 2009).
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသက်ရှိပုံမှန်အားအတားအဆီးသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်မူလတန်းစိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကနေကွဲကွာနေကြသည်။ ဒီဟု၏နောက်ထပ်လမ်းလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏လုပ်ငန်းစဉ်သက်ရှိသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် motivationally သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအကြား "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး" ကိုကျော်လွှားလိုအပ်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး၏အယူအဆဥပမာ (စိတ်ပညာဟောင်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်, Lewin, 1935; Shepard, 1957; Liberman နှင့် Forster, 2008) နှင့်စိတ်ပညာ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများ (ဥပမာ, စမ်းသပ်, လူမှုရေး, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, etc) အတွက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသီအိုရီ connotations အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေတွင်မှာ, ရိုးရှင်းစွာ objects သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များမကြာခဏတိုက်ရိုက်ပစ္စုပ္ပန်သို့မဟုတ်ကြုံတွေ့နေကြသည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်သက်ရှိထဲကနေမျိုးစုံရှုထောင့် (ဥပမာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေး, အချိန်, ဖြစ်နိုင်ခြေ, ဆာပလိုအပ်ချက်များကို) တစ်လျှောက်တွင်ကွဲကွာနေကြသောစိတ်ကူးတစ်ခုယေဘုယျရည်ညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည် ဤအအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များ။ အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများအတွက်, mesolimbic DA ရည်မှန်းချက်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေသူတို့ကိုခွဲခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးခရီးလှညျ့လမှတိရိစ္ဆာန်များကိုဖွတဲ့တံတားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အကွိမျမြားစှာစုံစမ်းစစ်ဆေး (မတူကွဲပြားသောနညျးလမျးမြား၌ဤ phrased ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်ပါပြီ